Safarka Xalaal ee Vancouver - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Vancouver waxay ku jirtaa meel adduunka aad looga jeclaan karo. Waxaa ku barakeysan maylal xeebeed, dhir doog ah oo ay ku caleemo saareen Buuraha Woqooyi Shore, way adag tahay inaad halkaas joogto oo aadan joogsan waqti uun oo aad la yaabto waxaad aragto.
Laakiin xoq hoosta goobtaas oo waxaad kaheleysaa magaalo caalami ah oo wajiyo badan leh. Waa wax yar oo hore iyo wax cusub oo cusub, oo ah meel ay ku hakadaan soogalootiga soo galiyey xaafadaha magaalada, xafladaha iyo cuntada. Hal dhinac, waa aagga seddexaad ee ugu weyn magaalooyinka Kanada, meesha labaad ee ugu weyn ee booqdayaasha waddanka iyo xarunta dhaqaalaha ee British Columbia. Casri ah magaalada muraayadda munaarado leh xaflado kala duwan, dhaqamo iyo soojiidasho, waxay sidoo kale marti galisay dhacdooyinka aduunka sida Bandhigii Aduunka ee 1986 iyo ciyaarihii Olombikada ee 2010. Dadka kale, waa Van Amsterdam, dib-u-dhigista bulshada horumarka bulshada leh ee laissez-faire u aragta marijuana. Iyada oo leh dhaxalkeeda Aasiya iyo u dhawaanshaha Shiinaha iyo Japan, qaar baa u arka inay tahay albaabka Aasiya. Dhamaan daqiiqadaha noocaas ah albaabkaaga, Vancouver waa a hoy u ah xiisaha bannaanka. Waa mid ka mid ah meelaha dhifka ah ee aad ku dhex mari karto buuraha, ku dhufan karto xeebta oo aad ku ciyaari karto kubbadda golf dhammaantood isla maalintaas.
Waxaas oo dhami waxay fududeynayaan inaad deegaan noqotaan. Soco Badaha. Maalin ku qaad mid ka mid jardiinooyinka. Ku raaxeeyso cuntada iyo daaweynta adduunka oo idil makhaayad xaafadeed. Ama kaliya ku qabso meel xeebta ah ama barxadda oo aad wada daawatid - Vancouver waa, ka dib, waa mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan adduunka.
Vancouverites waxay si ballaaran magaaladooda ugu qaybiyeen saddex: Westside, Eastside (ama East Van) iyo Xarunta magaalada. Kala qaybsanaantani waa juquraafi ahaan: wax kasta oo galbeedka Ontario St ah waa Westside, wax kasta oo bari ah waa Bariga Vancouver iyo wax kasta oo waqooyiga False Creek waa Xarunta Magaalada. Mid kasta oo ka mid ah aagagani wuxuu leeyahay soojiidasho iyo xaafado u gaar ah, sidaa darteed waqtiga u oggolow, sahamin inta aad awooddo.
Xarunta dhaqaalaha, dukaamaysiga iyo madadaalada ee magaalada. Waxay leedahay meelo badan oo caan ku ah Vancouver iyo isku xirnaanta fudud ee qaybaha kale ee magaalada iyo Dhulka Hoose. Iyada oo leh xulashooyin badan oo hoy iyo makhaayad ah, ayaa ku habboon, haddii qaali ah, meel aad saldhig u noqoto sahaminta magaalada.
Stanley Park iyo West End
Mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee lagu caweeyo Vancouver, xeebaheeda, Stanley Park iyo dukaamo yaryar iyo cunno badan.
Magaalada asalka ah ee Vancouver. Gastown waa isku darka xirmooyinka, hidaha iyo qurxinta magaalooyinka. Chinatown waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn Waqooyiga Ameerika.
Dhul warshadeed la soo ceshaday oo hadda ah xaafado casri ah oo casri ah oo leh aragtiyo fantastik ah oo ku teedsan False Creek. Degmadu waxay martigelisaa cayaaraha daawadayaasha waaweyn ee Vancouver waxayna hoy u ahayd Tuulada Cayaaraha markii laga soo bilaabo ciyaarihii Olambikada ee 2010 iyo goobtii Bandhigga Adduunka ee 1986 (Expo 86).
Ka baxsan Xarunta Magaalada
Jasiiradda Kitsilano & Granville
Xeebta 'Kitsilano Beach' ee aadka loo jecel yahay, istuudiyaha farshaxanka, Suuqa caanka ah ee Granville Island iyo suuq geynta qaab dhismeedka magaalooyinka - gaar ahaan Wadooyinka 4aad, Avenue iyo Broadway halkaasoo dukaamada silsiladaha ah ay ku dhexjiraan dukaamo madax banaan oo gaar ah
Jaamacadda British Columbia campus waxay leedahay dhowr soojiidasho, oo ay ku jiraan laba nooc oo jardiinooyin ah iyo Matxafka caanka ah ee Anthropology. Meel u dhow waa Baarkinka Baasifigga Baasifigga, iyo bariga bari ee Point Gray, waa saddex xeebood oo waaweyn, Jericho Beach, Locarno Beach iyo Spanish Banks. Xarunta UBC waxay kaloo hoy u tahay xeebta xulashada dharka caanka ah, Wreck Beach.
Main Street waa qeyb faneed soo socota oo soo socota oo magaalada ka mid ah oo ay ka buuxaan dukaanno gaar ah. Meel u dhow waa Queen Elizabeth Park, oo ah meesha ugu sareysa Vancouver oo leh beero bilaash ah oo wanaagsan.
Park Drive-Hastings Park
Meel u badan xaafadaha magaalada. Commercial Drive wuxuu leeyahay maqaayado badan oo qowmiyadeed.
Waa degaan inta badan la deggan yahay oo ay ku jiraan xaafadaha Kerrisdale, Dunbar, Oakridge, Marpole, Shaughnessy iyo xaafadaha Killarney.
Liiskani wuxuu daboolayaa oo keliya magaalada lafteeda. Meelaheeda farabadan, fiiri Lower Mainland.
In kasta oo Vancouver ay tahay magaalo isbarbar dhigaysa dhalinyaro, oo la aasaasay 1886, taariikhdeeda waxay bilaabmaysaa waqti hore. Dadyowga asaliga ah ee loo yaqaan 'Xeebta Salish' (First Nations) waxay ku noolaayeen aagga ugu yaraan 6000 oo sano, magaca Captain George Vancouver oo magaciisu yahay Vancouver wuxuu dhex maray maraakiibtii ugu horraysay ee sanadkii 1792. Degitaankii ugu horreeyay ee badhtanka magaalada Granville, oo ku taal barta maanta Gastown. Sanadkii 1867, sanadkii israacii Kanada, saloon ayaa laga dhisay goobtan waxayna ku dhashay magaalo yar oo baarar ah iyo bakhaarro ku dhagan dhagaxa weyn ee asalka u ah xeebta koonfureed ee hadda ah dekedda magaalada. Qalab u eg mid aan dhammaad lahayn oo ah alwaax tayo sare leh ayaa la galiyay oo laga iibiyay dekedaha Gastown iyo Moodyville, oo laga soo galo marinka. Qaar ka mid ah geedaha waxay ahaayeen dogobbo waawayn oo loo diray Shiinaha si ay u dhisaan Qasriga Boqortooyada ee Beijing, mid ka mid ah xisaabtana wuxuu ku adkaysanayaa in maraakiibta dabaysha ee adduunka aan la dhisi lahayn la'aantood geedaha Burrard Inlet.
Hallkii ugu horreeyay ee Magaalada Vancouver wax yar ayuu ka badnaa calaamadda gacanta lagu rinjireeyay oo lagu dhejiyay tiirar alwaax ah. Imaatinka tareenka transcontinental dhawr sano ka dib ayaa horseeday koritaan xitaa in ka sii badan iyadoo 1892-kii aaggu uu ka badnaa 20,000 oo qof; 18 sano kadib tiradaasi waxay kor u dhaaftay 100,000.
Xaqiiqda koritaanka joogtada ah sanad walba tan iyo (qaar badan oo ka mid ah labada lambar), iyo Greater Vancouver maanta waa aagga ugu weyn ee Kanada ee galbeedka galbeedka Toronto iyada oo ay ku nool yihiin in ka badan 2,600,000, in ka badan kalabar dadka British Columbia guud ahaan. Sidoo kale waa qaybta ugu koritaanka badan Kanada. Greater Vancouver waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan qowmiyadeed ee adduunka waxaana ku yaal magaalada labaad ee ugu weyn Shiinaha ee Waqooyiga Ameerika ka dib San Francisco.
Dad badan, Vancouver runti "way timid" 1986 markay magaaladu martigalisay Carwada Caalamiga ah ee Expo 86. Dareenka warbaahinta ee adduunka oo idil wuxuu ahaa mid si isdaba joog ah u muuqda, in kasta oo qaar badani u arkeen sharaf-xumada ka dhalata meelaha saboolka ah inay waxyeello u geysaneyso muwaadiniinta dabaqadda hoose ee Vancouver, maaddaama dad badan oo deggenaa Downtown Eastside laga saaray guryahooda. Vancouver sidoo kale waxay martigelisay ciyaarihii Olombikada ee Jiilaalka 2010, taas oo inta badan loo arkay guul kale, in kasta oo ay keeneen dhaliillo isku mid ah.
Vancouver waxaa laga yaabaa inay caan ku tahay quruxdeeda muuqaal ahaan, iyo fursadaha ay bixiso deegaankeeda dabiiciga ah. Vancouver waa mid ka mid ah meelaha dhifka ah ee aad aragti ahaan ka buuri karto buuraha, dabeylaha badda dhexdeeda, oo aad ku ciyaari karto wareega golf-ka isla maalintaas. Waxaa ku xeeran biyo sedex dhinac ah, waxaana taaj u yeelay buuraha North Shore, Vancouver waa meel aad u wanaagsan, iyo bar bilow weyn oo lagu ogaanayo dhaqdhaqaaqyada badan ee banaanka.
Vancouver waa deked weyn oo dhanka badda ah oo ku taal Badweynta Baasifigga, waxayna saldhig u tahay Maraakiibta Maraakiibta Maraakiibta ee badan xilliyada xagaaga. Waxay leedahay magac la mid ah magaalo kale oo gobolka ka mid ah, Vancouver, Washington (USA).
Waxay kuxirantahay qofka aad lahadleyso, ama laga yaabee, Goorma, Cimilada Vancouver ama wax badan baa la liiday ama laga masayray. Xilliga dayrta iyo jiilaalka ayaa sida caadiga ah qoyan oo daruuro cirka isku shareeraya sida buste qoyan oo qoyan (waxaa jira sabab Vancouver mararka qaarkood loogu yeero "Xeebta Wet"). Laakiin halkaas waa Faa'iidooyinka ay u leeyihiin dhammaan roobabkaas: inta badan ma da'o baraf (sida ka duwan inta badan Kanada inteeda kale) waxayna u horseeddaa muuqaal qurux badan oo midab leh bilowga guga horraanta Maarso. Waana halka Vancouver runti ka ifto - guga iyo xagaaga. Ilaha biyaha wali way qoyan karaan, laakiin way sii kululaanayaan oo geedo yaryar, geedo ubaxyo leh iyo ubaxyo ayaa soo bandhigaya muuqaal qurxoon. Maalmaha xagaaga waa kuwo dhaadheer oo badanaa qorrax leh qoyaan yar.
Heerarka maalinlaha ee badhtamaha Juun ilaa horraantii Sebtember waxay inta badan ku raaxaystaan ​​hoose illaa bartamaha-20s ° C (70-80 ° F). Heerkulka habeenkii badanaa waa dhallinta (55-70 ° F). Guga iyo deyrta ayaa ka qabow oo ka qoyan, sidaa darteed xirxirida dharka cimilada qabow iyo diiran ayaa lagula talinayaa. Haddii aad booqaneyso Vancouver inta u dhexeysa Nofeembar iyo Maarso, u diyaargarow cimilada qoyan iyo heerkulka qabow. Heerarka maalinlaha caadi ahaan waa qiyaastii 5-8 ° C (40-50 ° F) halka hoos u dhaca habeenkii uu ku dhowaan doono 0 ° C (32 ° F) mararka qaarkoodna qabow. Diisambar iyo Janaayo waa bilaha ugu qabow, oo leh roobka ugu badan iyo fursad baraf. In kasta oo jiilaalka Vancouver uusan u adkeyn sida kuwa ku yaal magaalooyinka kale ee waaweyn ee Kanada, haddana magaaladu maalmo yar oo baraf ah ayey heshaa bilaha jiilaalka sanad walba.
Xarunta Dalxiiska Vancouver Center, 200 Burrard St (heerka Plaza, Burrard & Cordova),, fax: + 1 604-682-6839. 8:30 subaxnimo-6 galabnimo Waxay u fidisaa khariidado, buugaag iyo macluumaad kale booqdayaasha.
Madaarka Vancouver International
Gegada diyaaradaha Vancouver waxay isla markiiba koonfurta ka xigtaa magaalada Vancouver. Waa garoonka labaad ee ugu mashquulka badan Kanada, wuxuuna u adeegaa sidii garoonka diyaaradaha ee Galbeedka Kanada iyadoo duulimaadyo joogto ah ay ku timaado meelo kale oo ka tirsan British Columbia, magaalooyinka waaweyn ee ku baahsan Kanada iyo Mareykanka, Aasiya iyo dhowr ilaa Yurub. Inta badan duulimaadyada Kanada waxay la socdaan xubin ka tirsan Star Alliance Air Canada iyo WestJet. Meelaha US tagto waxaa ka shaqeeya United Airlines, Alaska Airways, American Airlines, Delta Air Lines, Air Canada, Cathay Pacific (JFK) iyo WestJet. Duulimaadyada caalamiga ah waxaa ka shaqeeya Air Canada, KLM, Lufthansa, Cathay Pacific, British Airways, Korean Air, Philippine Airlines, iyo Air New Zealand oo la yiraahdo wax yar.
Farshaxanimo ku dhex yaal garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Vancouver
Saddexda xarumood ee YVR waa: Guriga duulimaadyada diyaaradaha ee gudaha Kanada; International duulimaadyada ka baxsan Kanada; iyo South, taas oo saldhig u ah prop, jet yar, iyo adeegga seaplane ee bulshada maxalliga ah ee BC iyo Yukon. Rugta boosteejooyinka gudaha iyo kuwa caalamiga ahba waa isku xiran yihiin oo waxaad si fudud ugu socon kartaa horay iyo gadaal inta udhaxeysa. Terminalka Koofureed kuma xirna boosteejooyinka kale, waxayna qiyaastii u jirtaa 10-12 daqiiqo markii laga baxo Terminalka gudaha iyo kan caalamiga ah. Adeegga baska bilaashka ah ee soconaya nus saac saacaddiiba qayb ka mid ah maalintii ayaa laga heli karaa inta udhaxeysa Koonfurta, iyo boosteejooyinka Gudaha iyo Caalamiga.
The Terminalka Caalamiga ah waxay leedahay laba meelood oo loo fuulo - Transborder iyo International. Aagga xuduudaha (Gate E) wuxuu u adeegaa dhammaan duulimaadyada ku taga Mareykanka wuxuuna leeyahay caadooyinka Mareykanka goobta. Socotada ka tagaya Kanada ee u duulaya Mareykanka waa inay nadiifiyaan caadooyinka ka hor waxaad raaceysaa diyaaradda, markaa naftaada waqti yar oo dheeri ah si aad u soo gasho markaad ka tagto Vancouver ee aado meelaha Mareykanka aadayso. (Xilliga xagaaga ee Maraakiibta dalxiis ee Alaska ay u socdaan Vancouver, duullimaadyada galabtii waxaa buuxsamay maraakiibta Alaskan ee ka soo degaya Vancouver; sii naftaada xitaa waqti dheeri ah oo dheeri ah si aad uga gudubto qadka dheer ee kastamka. Marka laga reebo Cathay Pacific ilaa New York City iyo Diyaaradda Philippine Air ee tagta Las Vegas; iyadoo ay ugu wacan tahay lugaha sii soconaya ee duulimaadyada caalamiga ah, waxaa looga adeegaa aagga caalamiga ah waxaana lagu sifeeyaa kastamka Mareykanka marka la yimaado. oo leh qaab casri ah oo dhameystiran oo leh nabarro u dhashay dhulkii BC iyo aragtiyo. Terminal-yada Caalamiga ah iyo kuwa Gudaha ayaa la ballaadhinayaa.
Waxaa jira noocyo kala duwan maqaayado, adeegyo iyo dukaamo haddii aad gaajaysan tahay ama aad rabto inaad disho waqti ka hor ama ka dib duulimaadka. Gegada dayuuraduhu waxay leedahay siyaasad “qiimayaasha waddooyinka”, tafaariiqleyda iyo makhaayadaha ayaa ku qasbaya inay ku iibiyaan qiimo la mid ah garoonka diyaaradaha sida magaalada si looga fogaado macaamil xumaynta. Makhaayadaha Cunnada degdegga ah ee caadiga ah waxay ku yaalliin ka hor baaritaanka amniga ee meelaha laga baxo. Cunto fiican, makhaayada Milestone waxay ku taalaa terminaalka gudaha wax yar oo ka baxsan jeegga amniga. Terminalka caalamiga ah, matxafka sare ee Fairmont Hotel wuxuu leeyahay aragti fiican iyo xulashooyin macquul ah oo qiimahoodu ku qoran yahay liiska. Canshuur la'aan wax iibsiga waa la sameyn karaa ka hor ama ka dib markaad nadiifiso caadooyinka garoonka diyaaradaha, illaa xadkaaga gaarka ah ee ka dhaafitaanka. ABM mashiinnada ayaa ku kala firirsan dhammaan teendhooyinka. Bedelka Lacagta xisaabiyeyaashu waxay ku yaalliin labada dhinac ee amniga terminaalka caalamiga ah.
Waxaa jira dhowr waddo oo magaalada looga galo garoonka diyaaradaha. Qiimayaasha iyo tilmaamaha hoos ku xusan waxaa loogu talagalay soo gelitaanka magaalada hoose ee Vancouver.
SkyTrain - The Khadka Kanada waxay adeeg toos ah ka bixisaa boosteejooyinka gudaha iyo kuwa caalamiga ah ilaa magaalada Vancouver 25 daqiiqo gudahood. Qiimaha laga raaco YVR ilaa Vancouver waa $ 9.20 (Julaay 2018), oo ay ku jiraan qiimaha sagalka aag ee $ 4.20 oo lagu daray $ 5 dheeri ah ("YVR AddFare") oo ka soo degtay garoonka diyaaradaha. Kordhinta $ 5 kaliya waxay khuseysaa safarada bilaabista garoonka diyaaradaha, maahan safarada u socdaa garoonka diyaaradaha. Intaa waxaa sii dheer, waxay khuseysaa oo kaliya khidmadaha Qiimaha Kaydka ee Kaadhka Compass, iyo tigidhada iyo Daypasses ee laga soo iibiyay mashiinnada wax lagu iibiyo ee dhammaan saddexda saldhig ee ku yaal garoonka diyaaradaha ee Vancouver. Ma khuseeyo kaararka billaha ah ee lagu rakibo Kaarka Compass, ama DayPasses oo meelo kale laga iibsado.
Bus - Marinka C92 wuxuu ku xiraa terminalka Koonfurta iyo Bridgeport saldhigga Khadka Kanada. Laga soo bilaabo saldhigga Bridgeport, Khadka Kanada wuxuu leeyahay adeegyo ku xira garoonka diyaaradaha caalamiga iyo gegeda diyaaradaha caalamiga ah ee Vancouver, Vancouver, iyo Richmond.
Taxi - Tagaasida ayaa saf yar uun ka ah meelaha alaabooyinka la sheeganayo. Kharashka tagaasida galay Vancouver ama Richmond waa go'an yihiin waxayna ku kala duwan yihiin hadba qaybta magaalada (ama "aaga") ee aad aadeyso. Tusaale ahaan, safarka Kitsilano, Granville Island, Yaletown iyo inta badan hoteelada magaalada hoose wuxuu ku kacayaa $ 31. Canada Place, Saldhigga Waterfront iyo hudheelada ku teedsan biyaha waxay ku kacaysaa $ 35. Qiimaha UBC iyo Point Gray waa $ 34. Bogga Taksiyada YVR wuxuu leeyahay faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan aagagga iyo qiimayaasha, oo ay ku jiraan khariidad. Haddii meesha aad u socotaa ay ka baxsan tahay Vancouver ama Richmond, qiimaha ayaa la bixin doonaa. Qiimaha xaddidan ee go'an wuxuu khuseeyaa keliya raacitaannada ka tagaya garoonka diyaaradaha; dhammaan safarada ilaa garoonka diyaaradaha ayaa la cabiray. Waxaa jira lacag $ 5 ah oo ka sarreysa sicirka go'an haddii aad rabto inaad joojiso intaad socoto. Dhamaan tagaasida u adeegta garoonka diyaaradaha waxaa looga baahan yahay inay aqbalaan kaararka amaahda. Waqtiga caadiga ah ee safarka laga bilaabo garoonka diyaaradaha ilaa magaalada hoose wuxuu ku saabsan yahay 20-30 daqiiqo.
Limousines - Limojet Gold waxay bixisaa xulashooyin sedan iyo limousine raaxo leh oo lagu galo magaalada. Raacitaanka Xarunta Magaalada waxay ku kacaysaa $ 70-75 iyada oo ku xidhan meesha aad aadayso iyo haddii aad ku jirto sedan ama limo. AAA Vancouver Limousine Service waxay bixisaa limousine fidsan iyo fidinta limos SUV.
Diyaaradaha float iyo heliport
Waxaa jira tas-hiilaadka floatplane:
Terminalka Koowaad ee Garoonka Caalamiga ah ee Vancouver - webiga Fraser, laba goobood oo qiyaastii 1 km u jirta dhismaha koonfurta
Xarumahan floatplane waxay bixiyaan duulimaadyada ay maamusho Harbor Air, Salt Spring Air, West Coast Air iyo Seair waxay si joogto ah uga duulaan magaalada hoose ee Vancouver iyo / ama YVR ilaa Victoria Inner Harbor, Jasiiradda Vancouver, Jasiiradaha Gacanka ee Koonfurta iyo meelo kale oo maxalli ah. Qaar ka mid ah hawlwadeennada diyaaradda ayaa sidoo kale bixiya dalxiisyo qurux badan oo ku yaal bartamaha magaalada iyo meelaha u dhow soo jiidashada oo ka bilaabanaya qiyaastii $ 80-100 qofkiiba… hab aad u wanaagsan oo lagu arko muuqaal dusha sare ee magaalada hoose. Raadin deg deg ah oo Google ah ayaa u soo bandhigi doonta degellada internet-ka inta badan hawl wadeennada dayuuradahaas dul sabeynaya.
Waxaa jira qalab helliport oo labaduba ku yaal:
Terminalka Koowaad ee Garoonka Caalamiga ah ee Vancouver
Garoomada diyaaradaha ee kale
Wadada weyn ee Vancouver ee bariga ka timaada waa Wadada 1 (Wadada Trans-Canada). Wadadani waxay ku wareegsan tahay cirifka bari ee Vancouver, sidaa darteed haddii aad rabto inaad gasho magaalada, waxaad u baahan doontaa inaad ka baxdo waddada Grandview Highway, 1st Avenue ama Hastings Street.
Laga soo bilaabo soohdinta Mareykanka / Kanada koonfurta magaalada, Highway 99, oo ku xidha US Interstate 5, wuxuu u socdaa waqooyiga ilaa Vancouver. Wadada weyn waxay dhammaataa Buundada Oak Street ka dib, waxayna u leexataa dhinaca Oak Street oo woqooyi u sii jeeda. Darawallada tagaya bartamaha magaalada waxay u baahan doonaan inay galaan Granville Street (oo la mid ah Oak St dhanka galbeed), ama Cambie Street (isbarbar dhigga bariga), si ay u galaan Granville Street ama Buundada Cambie Street ee ka gudubta False Creek badhtamaha magaalada
Haddii aad ka imaaneyso Waqooyiga Shore ama dhibco kale oo ka sii fog waqooyiga, wadada kaliya ee Vancouver loo maro waa buundada. Fursadahaaga ayaa ah Buundada Libaaxyada Buundada (Wadada 99) oo ku geyn doonta Stanley Park iyo Vancouver's West End ama the Buundada Labaad ee loo Yaqaano 'Narrows Bridge / Ironworkers Memorial Bridge' (Wadada 1) taas oo ku geynaysa xaafadaha East Van.
Qeybta Hoose, gaar ahaan Vancouver waxaa si wanaagsan ugu adeega adeegyada basaska, badankooduna waxay ku dhammaadaan Xarunta Dhexe ee Baasifigga, 1150 Station Street, Vancouver, BC (Bariga Magaalada Downtown Vancouver off Main Street). . Tiro ka mid ah ayaa sidoo kale waxay leeyihiin soo qaadis iyo ka-degis dheeraad ah hoteelada ku yaal bartamaha magaalada, Richmond, Surrey, White Rock iyo dhowr meelood oo ku yaal agagaaraha iyo waliba garoonka diyaaradaha. Khadadka basaska oo dhan uma wada adeegaan Saldhigga Dhexe ee Baasifigga. Basasku waxay iskaga gudbayaan Maraykanka iyo Kanada meel kale oo isgoys ah oo 5 may / 8 km bari ka xigta Peace Arch Park (BC Highway 99 / I-5) oo ay weheliso wadada weyn ee BC 15. Halkan waxaa ah tusaalooyin yar oo ka mid ah khadadka basaska ee magaalada ka imanaya meelaha u dhow iyo ka fog Kanada iyo Mareykanka:
Isku xiraha Ferries BC (Kooxda Gaadiidka ee Wilson). Isku xidha Vancouver iyo Victoria iyada oo loo marayo Tsawwassen iyo Swartz Bay Ferry. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Kantrail (Amtrak Thruway), Xarunta Dhexe ee Baasifiga @ 1150 Station St,, lacag-la'aan: + 1-877-940-5561. Waxay ka shaqeysaa basaska xawliga ah inta udhaxeysa Seattle King St Station (Amtrak) iyo Vancouver. Waxay sidoo kale sameeyaan joogsiyo jadwal ah oo dheeri ah oo ku yaal Sandman Saxeexa Hoteelka (10251 St Edwards ee Richmond) iyo Pacific Inn (1160 King George Highway ee White Rock) si ay uga soo qaadaan safarka koonfurta uguna baxaan kaliya woqooyi $ 40 hal waddo , $ 75 safar wareeg ah; qiimo dhimista ardayda, militariga, waayeelka & carruurta da'doodu tahay 4-11.
Ebus, lacag-la'aan: + 1 877-769-3287. Waxay tagtaa ilaa Kamloops iyo Kelowna iyada oo loo marayo Abbotsford laba waddo oo kala duwan (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Khadadka Greyhound (USA) & Bolt Bus,, lacag-la'aan: + 1-800-231-2222 (Mareykanka) Wuxuu ku xiraa Vancouver Seattle (oo loo maro Coquilam, Bellingham, Mt Vernon iyo Everett oo ay weheliso Wadada weyn 15 / I-5). Rakaabku waxay u wareegayaan Seatte ama Portland si ay ugu sii socdaan magaalooyin kale oo Mareykanka ah. Baska Bolt, Nooc hoosaad Greyhound, wuxuu ku shaqeeyaa isla wadada Greyhound Lines marka laga reebo inay kaliya istaagto Vancouver, Bellingham, Seattle, Portland, Albany iyo Eugene. Greyhound Canada waxay joojisay adeegyadii bartamaha iyo galbeedka Kanada. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Khadadka Tababarka Baasifigga (PCL),, lacag-la'aan: + 1-800-661-1725. Bas toos ah ugu taga Whistler iyo Squamish oo ka yimaada bartamaha Pacific Central Station iyo garoonka diyaaradaha. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Gaadiidka Wareega,, lacag-la'aan: + 1-877-717-6606. Waxay tagtaa ilaa Whistler iyo Squamish garoonka diyaaradaha iyo hoteelada magaalada (Fairmont Hotel & Hyatt Regencey) (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Tababar Degdeg ah, (joogsiga baska) Kanada Place Pier @ 999 Canada Place,, lacag-la'aan: + 1-800-665-2122. Baska kaxee inta udhaxeysa garoonka diyaaradaha ee loo yaqaan 'SeaTac Airport' adiga oo sii maraya bartamaha magaalada Seattle, Tulalip Casino oo ku taal Everett, garoonka diyaaradaha ee Bellingham iyo Vancouver BC. Basaska Northbound ee tagaya Kanada kaliya waxay ka qaadaan rakaabka Mareykanka halka basaska koonfurta aadaya ee aadaya Seattle ay kaliya ka degaan Mareykanka Waxay sameeyaan joogsiyo qorshaysan oo dheeraad ah oo kuyaal bartamaha magaalada Holiday Inn (1110 Howe St); River Rock Casino (8811 River Road Resort) iyo Dukaanka Campbell River (790 176th St, Surrey). Joogsiyo dheeraad ah oo hudheel ah ayaa lagu diyaarin karaa boos celin 24hr ah. Basaska Southbound-ka ayaa ka soo raaca Vancouver halka baska waqooyiga ka tagaya kaliya ay ka soo degaan. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Rider Express, lacag-la'aan: + 1-833-583-3636. Adeegga basaska ee Wadada Trans-Canada Highway ee Winnipeg ilaa Vancouver, laba jeer maalintii, iyo inta udhaxeysa Edmonton iyo Saskatoon. Adeegga: Revelstoke, Salmon Arm, Kamloops, Hope, iyo Abbotsford (British Columbia); Calgary, Strathmore, Canmore, Lake Louise, iyo Banff (Alberta); Koofiyadaha Daawada, Swift Current, Moose Jaw, Regina, Whitewood, iyo Moosomin (Saskatchewan); iyo Brandon, iyo Winnipeg (Manitoba). (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Baska Tofino,, lacag-la'aan: + 1-866-986-3466. Wuxuu kor u kacaa Courtenay, Campbell River, Parksville iyo Tofino iyadoo loo marayo Nanaimo oo ku taal Jasiiradda Vancouver iyada oo loo marayo Horseshoe Bay-Departure Bay Ferry. Waxay sidoo kale leeyihiin jidad dheeri ah oo ka yimaada Nanaimo ilaa Victoria iyo Port Hardy. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Xarunta Dhexe ee Baasifigga
Xarunta Dhexe ee Baasifigga, 1150 Station Street, Vancouver, BC (Bariga Magaalada Downtown Vancouver off Main Street). Tareennada oo dhan waxay yimaadaan rugtaan. Halkaas, waa tagsi gaaban oo tagta aagga ganacsiga dhexe, ama waxaad ka qaadan kartaa SkyTrain saldhigga Main St / Science World oo labo fogaan u jira.
Tareenka u qaadashada Vancouver uma badna inay noqon doonto xulashada ugu raqiisan, laakiin waa mid muuqaal qurxoon leh. Xulashada tareenka waxaa ka mid ah:
Tareenka VIA leeyahay Kanadiyaanku kaas oo ka bilaabma Toronto ilaa Vancouver oo ay ka baxaan saddex todobaadle ah.
Buuraha dhagaxa leh wuxuu shaqeeyaa marinada udhaxeeya Vancouver iyo Banff, Calgary iyo Jasper seddex jeer usbuucii laga bilaabo Abriil ilaa Oktoobar.
Amtrak Cascades waxay socodsiisaa adeeg labo jeer ah inta udhaxeysa Seattle iyo Vancouver. Adeeg dheeraad ah oo loo fidiyo Seattle oo ah baska Cantrail (eeg 'By bus' ee kore), oo u shaqeeya sidii Mootada Amtrak Thruway. Isku xirnaanta dheeriga ah Tareenada Amtrak ku sugan Seattle.
Haddii aad haysatid waqti iyo lacag, safarka tareenka ee Vancouver wuxuu noqon karaa hab wanaagsan oo lagu arko Buuraha Rocky (Kanada). Tan waxaa looga sii hadlayaa Rocky Mountaineer.
Waxaa jira laba boosteejo oo doonta laga raaco Digaaga BC ee Mainland Main. Labada terminaalba way ka fog yihiin xudunta magaalada waxaad u baahan doontaa inaad ku raacdo gaari, taksi ama bas si aad uga gasho magaalo kasta oo gobol iyaga ka mid ah (iyo dhinaca kale).
Horseshoe Bay, oo ku yaal West Vancouver, waxay leedahay waddooyin ka yimaada Nanaimo, Jasiiradda Bowen iyo Xeebta Sunshine. Basaska # 250 iyo # 257 waxay ku xirmaan bartamaha magaalada Vancouver, oo ay ku jiraan joogsiga oo ku yaalo hal guri oo koonfurta ka xigta Saldhiga Burrard ee Khadka Expo ee Skytrain.
Tsawwassen, oo ku taal koonfurta Delta. Waxaa jira doonyo ka yimaada Nanaimo iyo Victoria oo ku yaal Jasiiradda Vancouver iyo sidoo kale jasiiradaha Gacanka Koonfureed. Waxaa lagu heli karaa bas # 620 oo ka socda Richmond oo jooga Saldhigga Bridgeport ee Khadka Skytrain Canada.
Markab dalxiis oo maraya hoostiisa Buundada Libaaxyada
Port Metro Vancouver waa dekedda guriga loogu dalxiis tago caanka ah ee Vancouver-Alaska. Laga bilaabo Maajo-Sep, in ka badan 3/4 milyan oo soo booqdayaal ah ayaa mara marinka markabka dalxiiska ee Port Metro Vancouver.
Terminalka Booska Kanada (Magaalada Hoose Vancouver). Waxay ku taal hareeraha biyaha iyo daqiiqado yar oo socod ah bartamaha magaalada Vancouver ama Saldhigga Waterfront. Waa terminal markab dalxiis aasaasiga ah. Canada Place waxaa loo dhisay Expo86 waxaana lagu aqoonsan yahay saqafkeeda sare oo u eg shan shiraac oo cad. Gaadiid badan oo dhulka ah, hudheelo aad ufiican, dukaamaysi, cunto, madadaalo, iyo soojiidasho ayaa laga heli karaa Canada Place.
Dadka haysta baasaboorka Mareykanka waxaa laga yaabaa inay kaqeybqaataan "Onboard Check-in" iyo "US Direct" si loo habeeyo howlaha markabka dalxiiska iyo garoonka diyaaradaha. US Toosan waxay u oggolaanaysaa rakaabka imanaya garoonka diyaaradaha ee Vancouver (YVR) inay si toos ah ugu wareejiyaan markab dalxiis oo isla maalin socdaal ah iyagoo ka qayb qaadanaya howlaha socdaalka iyo nadiifinta kastamka ee la dedejiyay. Soo-galitaanka Diyaaradda waxay u oggolaanaysaa rakaabka imanaya markab dalxiis oo ka duulaya YVR isla maalintaas inay si toos ah ugu wareejiyaan YVR iyagoo ka qayb qaadanaya geeddi-socodka soo-degitaanka iyo soo-celinta kastamka oo la dedejiyay.
Barnaamijyadani ma khuseeyaan dadka rakaabka ah ee qorsheynaya joogitaanka safarka ka hor ama safarka safarka ee Vancouver. Dhammaan khadadka dalxiisku kama wada qayb galaan, markaa ka hubi khadkaaga safarka si aad u aragto haddii aad ka faa'iideysan karto barnaamijka 'Onboard Check-in / US Direct'.
Vancouver waa mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee ku yaal Waqooyiga Ameerika iyada oo aan lahayn waddo toos ah oo toos u gasha bartamaha magaalada (soo-jeedinnada waddada weyn ee sannadihii 1960-meeyadii iyo 1970-meeyadii waxaa ka adkaaday mucaaradka bulshada). Natiijo ahaan, horumarku wuxuu qaatay koorso ka duwan inta badan magaalooyinka kale ee waaweyn ee Waqooyiga Ameerika taasoo keentay adeegsi aad u sarreeya oo ku socdaal ah iyo baaskiil wadid, cufan, udub dhexaad socod iyo moodal horumarineed oo meelo kale laga barto laguna daydo
Skytrain ee Main St./Scienceworld
Tareenka dadweynaha ee loo maro Metro Vancouver waa nidaam isku dhafan oo basaska, tareenka deg degga ah (SkyTrain) iyo doomaha (SeaBus) ee daboolaya magaalada Vancouver iyo dhammaan degmooyinka ay ka kooban tahay Metro Vancouver. Waxay u fidsan tahay ilaa woqooyi ilaa Libaaxyada Baay, koonfurta ilaa xadka Mareykanka iyo bariga ilaa Langley iyo Maple Ridge. Waxay noqon kartaa mid waxtar badan u leh ku soo wareejinta magaalada Vancouver iyo hareeraheeda, iyo, in kasta oo qaar ka mid ah burburka sare ee SkyTrain, guud ahaan waa waxtar.
TransLink waa maamulka gaadiidka gobolka iyo websaydhkooda iyo khadka macluumaadka macaamiisha (+1 604-953-3333) labaduba waxay bixiyaan qorsheynta safarka iyo macluumaad ku saabsan qiimaha, halka laga iibsado tikidhada iyo siyaasadda soo celinta. Khariidad gaadiid goboleed ayaa si ballaaran looga heli karaa dukaamada ku habboon iyo bogga Translink. TransLink ma laha barnaamij mobilo ah, laakiin Google Maps, Transit iyo Citymapper dhammaantood waxay marin u leeyihiin xogta GPS-ka TransLink si ay u muujiyaan macluumaadka dariiqa socda iyo waqtiga imaatinka la qiyaasay.
Qiimaha iyo aagagga
Translink waxay u kala jabisay Metro Vancouver seddex aag tikitka lagu raaco; qiimahaagu wuxuu kuxiranyahay tirada aagaga aad ku safarto. Qiimaha dadka waaweyn ee caadiga ah waa $ 2.95 dhamaan safarada basaska ee laga raaco Metro Vancouver iyo safarka SkyTrain ee Magaalada Vancouver (Zone 1). Waxay sidoo kale dabooleysaa dhammaan nidaamka safarka ee dhammaan xilliyada ugu sarreysa: dhammaadka usbuuc-dhammaadka, ciidaha, iyo fiidkii maalmaha-shaqada wixii ka dambeeya 6:30 PM. U safridda Vancouver ee SkyTrain ama SeaBus waxay ka gudubtaa xuduudaha aagagga qiimaha iyo kharashka $ 4.20 ilaa $ 5.70 maalmaha shaqada ka hor 6:30 PM.
Kadib bixinta khidmadda, waad wareejin kartaa ama dib-u-dhigan kartaa tiro aan xadidnayn oo lacag la’aan ah oo aan dheeraad ahayn 90 daqiiqo. Kaadhadhka Compass iyo Compass Ticket isticmaalayaashu ma laha xaddidaadyo ku kala wareejinta inta u dhexeysa hababka socdaalka, laakiin wadayaasha basaska ee bixiya qiimaha lacagta waxay u wareejin karaan basaska kale oo keliya.
Marka ugu dambeysa ee la soo galo daaqadda 90-ka daqiiqo, Compass Card iyo Compass Ticket isticmaaleyaashu waxay leeyihiin 120 daqiiqo oo dheeri ah oo ay uga baxaan meesha ugu dambeysa ee ay tagayaan. Taabashada waqtigaan ka dib waxay keeneysaa qiimo kale oo laga qaado.
Qiimaha tikidhada safarka ee magaalada Vancouver (Luulyo 2018) Tirada aagagga Maxay ka daboolaysaa Fare Dadka Waaweyn
1 Aag Ku safar gudaha magaalada Vancouver $ 2.95 $ 1.90
2 Soonaha Safarka u dhexeeya Vancouver iyo North Vancouver, West Vancouver, Burnaby, New Westminster iyo Richmond $ 4.20 $ 2.90
3 Soonaha Safarka u dhexeeya Vancouver iyo dhammaan meelaha kale ee la tago $ 5.70 $ 3.90
Kharashka la bixiyay iyadoo la isticmaalayo Kaarka Compass (eeg qaybta xigta) waa la dhimay oo qiimahoodu u dhexeeyaa $ 2.30 iyo $ 4.40 qiimaha dadka waaweyn.
Qiimaha dhimista ayaa loo heli karaa carruurta da'doodu tahay 5-13, ardayda dugsiga sare iyo da'da weyn ee Vancouver (65+). Haddii aad arday tahay, waa inaad sidataa TransLink GoCard si aad u hesho qiimaha dhimista ee dhimista. Carruurta da'doodu tahay 4 ama ka yar waa lacag la'aan.
Bixinta qiimahaaga: Compass
Compass waa nidaamka elektarooniga ah ee lagu raaco basaska, SkyTrain, SeaBus iyo West Coast Express. Basasku wali way aqbalaan lacag caddaan ah markaad fuulayso, laakiin irdaha tikidhada ee SkyTrain iyo saldhiga SeaBus kaliya waxay aqbalaan Compass. Waxaa jira laba xulashooyinka Compass:
Tigidhada Compass - Tigidh cad oo u roon hal safar. DayPass - safarka aan xadidneyn ee baska, SkyTrain iyo SeaBus ee kuyaala aagaga oo dhan hal maalin - sidoo kale waxaa loo iibsan karaa Tikidhada Compass; iyo
Kaarka Compass - Kaar casriyeysan oo dib loo isticmaali karo oo keydin kara qiimaha, xamuul kaar oo bixin kara qiimo jaban. Kaadhadhka buluuga ah waxaa loogu talogalay tikidhada dadka waaweyn, kaararka liinta waxaa loogu talagalay qiimaha dhimista. Ka eeg sanduuqa macluumaadka si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Tigidhada Compass iyo Kaararka Compass ee Dadka Waaweyn waxaa laga iibsan karaa Mashiinnada Iibinta ee Compass ee saldhigyada SkyTrain iyo SeaBus iyo meelaha Dawooyinka ee London qaarkood. Dhammaan noocyada kaararka iyo tigidhada waxaa laga iibsan karaa miiska meelaha qaarkood 7-Eleven, Safeway, London Drugs, Goobaha Martida Daroogada, iyo Xarunta Adeegga Macaamiisha ee Compass ee istaanka-Chinatown SkyTrain. Websaydhka Translink wuxuu leeyahay khariidad gacan ku haysa ah oo tusaysa meelaha tafaariiqleyaasha Compass iyo Compass Vending Machines. Mashiinnada wax lagu gado waxay aqbalaan lacag caddaan ah, kaarka deynta iyo kaarka deynta.
Iibsiga Kaarka Compass wuxuu u baahan yahay $ 6 dhigaal ah. Debaajiga waa la soo celin karaa haddii aad ku soo celiso Kaarkaaga Compass ama aad u dirto foomka Codsiga Soo Celinta Xarunta Adeegga Macaamiisha ee Compass.
Taabo kaarkaaga Compass ama tigidhka bilowga safar kasta oo aad ku qaadatid gaari kasta, iyo tuubada ka bax markasta oo aad ka baxdo albaabka laga raaco. Wadayaasha basaska ma taabtaan baxay. Tani waxay u oggolaaneysaa nidaamka xisaabinta qiimaha saxda ah.
Haddii aad ku safreyso koox, Tigidhada Compass iyo Kaararka lama wadaagi karo xubnaha kooxda. Qof kastaa wuxuu u baahan doonaa tigidh ama kaar u gaar ah oo uu ku raaco kana baxo iridaha lagu raaco.
Kaararka amaahda 'Mastercard' iyo Visa sidoo kale waxaa loogu isticmaali karaa akhristayaasha Compass / khidmadaha tikidhka dadka waaweyn. Markaad soo gasho, kaarkaaga ayaa horay loogu sii oggolaanayaa sicirka saddexda aag. Markaad dhoofayso, qiimaha ayaa lagu xisaabin doonaa iyadoo loo eegayo aagagga la soo safray. Boorsooyinka mobilada (sida Apple Pay iyo Google Pay) sidoo kale way shaqeeyaan, kaliya iska hubi in taleefankaagu haysto batteri kugu filan si aad uga bixi karto dhamaadka safarkaaga. Kaararka deynta wali waxay ka shaqeeyaan mashiinnada iibinta Compass, laakiin kama shaqeeyaan akhristayaasha Compass.
Soo ogow sida loo bixiyo qiimaha iyo halka laga iibsado kaararka, oo aqri siyaasadda celinta TransLink.
Gudubta iyo qiimaha keydsan
Haddii aad si culus u adeegsanayso nidaamka taraafikada, kaararka waxaa lagu buuxin karaa Kaarka Compass.
A DayPass waa ikhtiyaar lacag badbaadin ah oo loogu talagalay dadka safarka ah ee sida aadka ah u isticmaali doona gaadiidka dadweynaha maalin keliya. $ 10.25 (ama $ 8 tanaasul) (Julaay 2018), waxay bixisaa socdaal aan xadidneyn oo lagu maro Metro Vancouver baska, SkyTrain iyo SeaBus illaa dhamaadka maalinta adeegga, goor dambe oo habeen ah.
Bixitaan bille ah lacag ayey kuu keydin kartaa haddii aad transit-ka isticmaaleyso maalin kasta ku dhowaad bil. Waxay ku kacayaan $ 95 iyo $ 174 (ama $ 54 tanaasul) iyadoo ku xiran tirada aagagga.
Shabakada safarka degdega ah ee Vancouver
The baska Adeeggu wuxuu daboolayaa aagga ugu ballaaran wuxuuna ku safraa inta badan jidadka waaweyn ee magaalada. Dhowr khadadka basaska degdegga ah ayaa la wacay Khadadka B magaalada oo dhan. Markay fuulayaan, rakaabku waa inuu ku garaacaa Kaarkooda Compass ama Tigidhada Compass, ku iibsadaan tigidh lacag caddaan ah (beddelka saxda ah ee loo baahan yahay, qadaadiicda oo keliya), ama tigidh u sii darawalka
Lacagta kaashka ah ee bas kasta oo tagaya meel kasta waqti kasta waa guri $ 2.95 ah. Sababtaas awgeed, dadka isticmaala Kaarka Compass kaliya ayaa taabo in markaad baska raaceyso, oo waligaa ha taaban baxay markaad ka degayso, si ka duwan dhammaan noocyada kale ee gaadiidka.
Joogsi kasta oo istaaga baska ee Metro Vancouver wuxuu leeyahay nambarka istaagga baska oo shan lambar ah oo u gaar ah (lambarka huruudda ah ee sare ee calaamadda joogsiga baska). U dir SMS lambarkaas joogsiga ah 33333 si aad u hesho lixda soo socota ee waqtiyada imaatinka basaska. Heerarka fariimaha caadiga ah ayaa la adeegsadaa. TransLink ma shaqeyso barnaamij, laakiin barnaamijyo badan oo dhinac saddexaad ah (sida Khariidadaha Google) ayaa loo isticmaali karaa in lagu helo waqtiyada transit-ka, waxaa intaa dheer websaydh moobiil ah oo la heli karo. Meelo badan oo basaska laga raaco waxaa ka mid ah bandhig dijitaal ah oo lagu qiyaaso waqtiyada imaatinka baska.
The SkyTrain waa inta badan kor loo qaado, si toos ah otomaatig u ah nidaamka taraafikada ee isku xira magaalada hoose ee Vancouver iyo qaar ka mid ah hareeraheeda koonfurta iyo bariga.
The Khadka Expo wuxuu maraa Burnaby iyo New Westminster ilaa Saldhigga Columbia, halkaasoo ay ku kala go'do iyadoo hal waddo loo maro King George Station oo ku taal Surrey halka wadada kalena loo aadayo xarunta Jaamacadda / Wax soosaarka Wadada ee Burnaby.
The Khadka Millennium waxay ka socotaa bariga-galbeed VCC-Clark oo ku taal Bariga Van iyada oo loo maro waqooyiga Burnaby ilaa Saldhigga Lougheed, ka dibna waxay u sii socotaa Port Moody iyo Coquitlam iyada oo loo marayo Extgreen Extension.
The Khadka Kanada waxay aadeysaa koonfurta garoonka diyaaradaha Richmond iyo Vancouver.
Xarumaha muhiimka ah ee SkyTrain waxaa ka mid ah:
Wadada-Ganacsiga - wuxuu galayaa makhaayadaha iyo wax ka iibsiga Dukaanka Ganacsiga ee Bariga Vancouver wuxuuna u wareejiyaa baska 99 B-Line ee UBC
Burrard iyo Granville - saldhigyada ugu badan ee bartamaha degmada ganacsiga. Waxa kale oo aad la xidhiidhi kartaa khadka 95B ee Saldhigga Burrard.
Waterfront - barta kulan ee khadadka Expo iyo Kanada, SeaBus, tareen fara badan iyo jidadka basaska degdega ah, iyo tareenka tareenka ee u raaca West Coast Express. Waxay sidoo kale soo gashaa Gastown waxayna kudhowdahay Xarunta Shirarka Kanada Place / tas-hiilaadka Terminal Cruise.
Qiimaha tikidhada ee 'SkyTrain' wuxuu kuxiran yahay inta aag ee aad ku safarto iyo waqtiga aad safreyso. Magaalada Vancouver waa Aaga 1. Xaafadaha u dhow dhow sida Burnaby, New Westminster, Richmond, iyo North Vancouver waa Aaga 2. Xaafadaha fog ee ka fog koonfurta Fraser River ama bariga Burnaby waa aagga 3. Waqtiyada ugu badan, Kaarka Compass adeegsadayaashu waxay bixiyaan inta udhaxeysa $ 2.30 iyo $ 4.30, iyo wadayaasha bixiya qiimaha lacagta waxay bixiyaan $ 2.95 ilaa $ 5.70. Waqtiyada-ugu sarreysa, rakaabku waxay bixiyaan qiimaha hal-aag.
Isticmaalayaasha Kaararka Compass-ka ayaa galaya ama ka baxaya mar kasta oo ay ka soo galayaan iridaha lagu raaco. Haddii aad ilowdo inaad gasho ama aad ka baxdo, waxaa lagaa qaadayaa qiimaha ugu badan. Dadka doorta inaysan isticmaalin Kaararka Compass waxay iibsan karaan hal tikidh Compass Tigidhada halkii.
The BaddaBus waa doon rakaab ah oo isku xireysa Saldhigga Waterfront ee ku yaal bartamaha magaalada illaa Lonsdale Quay oo ku taal Waqooyiga Vancouver. Guud ahaan waxay socotaa 15 daqiiqo kasta illaa 9: 16 PM ka bixitaanka, ka dib markaa waxay socotaa 30 daqiiqo kasta illaa safarka ugu dambeeya (M-Sa 1: 22 AM, Su 11: 16 PM).
Inta lagu jiro waqtiyada ugu sarreysa, qiimaha laba-aag ayaa loo baahan yahay. Taasi waa $ 3.35 rakaabka wata Kaararka Compass iyo $ 4.20 (Julaay 2018) kuwa haysta Compass Tigidhada. Waqtiga-ugu sarreysa, rakaabku waxay bixiyaan qiimo hal-aag ah.
Doomaha dhex mara Beenta Beenta ah
Safar deg deg ah oo looga gudbo doon yar-yar oo qurux-yar-oo doonta-yar ayaa noqon karta tan ugu xiisaha badan, taraafig-la'aanta ah, iyo habka ugu habboon ee lagu dhex mari karo qodobo kala duwan oo ku saabsan Been Abuur:
Matxafka Badda ee Vanier Park oo ku yaal xeebta koonfureed,
Xarunta Biyaha ee Sunset Beach ee xeebta woqooyi,
- Hornby St oo ku taal xeebta woqooyi,
Jasiiradda Granville iyo Suuqa caanka ah ee Dadweynaha ee xeebta koonfureed,
Yaletown / Davie St. oo ku taal xeebta woqooyi,
Stamp's Landing / Monk's iyo Spyglass Place oo ku taal xeebta koonfureed,
Plaza of Nations iyo Edgewater Casino oo ku taal xeebta woqooyi, iyo
Dunida Sayniska, cirifka cirifka geeska ee dhamaadka bari ee Beenta Creek.
Adeegga waxaa bixiya Ferries False Creek oo wata doomo yar oo buluug ah iyo Aquabus oo wata doomaha qaanso roobaadka. Labada doomaha waxay maraan wadooyin yar oo kala geddisan, dekedooduna waa Jasiiradda Granville waxay ku yaalliin labada dhinac ee Suuqa Dadweynaha. Laga bilaabo Jannaayo 2017, qiimaha dadka waaweyn waa $ 3.25 waddooyinka gaagaaban, $ 5.50 jidadka dhaadheer, ama $ 15 maalin dhaaf. Dadka waayeelka ah iyo carruurta, qiimayaashu waa $ 2, $ 3.75, iyo $ 11-13. Aquabus waxay bixisaa 25 daqiiqo oo ah “mini-cruise” agagaarka False Creek $ 8 qofkiiba, iyo $ 4 canug walba ama waayeel.
Vancouver's wadada network guud ahaan waa nidaam xariijin leh "Waddo" oo usocota waqooyi-koonfur iyo "Avenue" oo usocota bariga-galbeed. Wadooyinka halbawlaha ah waxay si fiican u raacaan shabakada (inkasta oo ayna si fiican u ahayn), laakiin jidadka dhinacyadu badanaa waxay ku baaba'aan baloogyada markiiba kadibna way soo baxaan. Inta badan "Wadooyinka" waa la tiriyey waxayna had iyo jeer isticmaalaan Bariga ama Galbeedka si ay ugu tilmaamaan inay tahay dhinaca bari ama dhinaca galbeed ee Wadada Ontario. Qaar ka mid ah jidadka waaweyn ayaa adeegsada magacyo halkii ay ka isticmaali lahaayeen lambarro (Broadway wuxuu noqon lahaa 9th Ave, King Edward Ave wuxuu noqon lahaa 25th Ave).
Downtown Vancouver waxay leedahay nidaam shabaqeeda u gaarka ah mana raaco qaabka wadada / wadada magaalada inteeda kale. Sidoo kale waxaa ku wareegsan biyo sedex dhinac ah, sidaa darteed inta badan wadooyinka soo gala iyo kuwa kabaxa waxay kaaga baahan yihiin inaad buundo ka gudubto. Tani waxay sababi kartaa ciriiriga taraafikada, gaar ahaan xilliyada ugu sarreysa (subaxdii iyo fiidkii safarka, galabtii sabtida iyo qoraxdu dhacdo, dhacdooyinka isboorti ee waaweyn), sidaas darteed u sababee qorshe kasta oo wadista, ama iska ilaali haddii ay suurtagal tahay.
Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee looga hortagi karo ciriiriga taraafikada ayaa ah in la dhageysto warbixinnada taraafikada markay ahayd AM730. Idaacaddani waxay ka warbixisaa oo keliya taraafikada waxayna ku deg degi kartaa inay soo sheegto wixii shilal ah iyo ciriiriga, iyo sidoo kale warbixinnada doonta doonta BC, cusboonaysiinta buundada iyo tunnelka, waqtiyada sugitaanka xadka, iyo macluumaadka kale ee la xiriira ku soo wareegga magaalada iyo hareeraheeda. Waxay sidoo kale soo dirtaa cusbooneysiinta cimilada iyo wararka maxalliga ah.
Muuqaal u gaar ah Vancouver iyo inta kale ee British Columbia waa isgoysyo leh biligleynaya calaamadaha taraafikada. Kuwani ma samayn Muuji leexasho bidix oo horay u socota sida ay ka muuqan doonto meelo badan oo kale oo Waqooyiga Ameerika ah. Taabadalkeed, nalka cagaaran oo dhalaalaya ayaa tilmaamaya calaamadda taraafikada oo uu dhaqaajin karo oo kaliya lugeeyaha ama baaskiil ku socda wadada dhinaceeda, laakiin aan ku socon karin gaari. Marka signaalku isu beddelo casaan, taraafikada ayaa joogsata sida astaamaha taraafikada oo kale. Gadiid kasta oo wadada dhinaceeda ah waa inuu adeecaa calaamadda joogsiga ee wadada waana inuu u hogaansamaa lugeynaya kasta oo ka gudbaya wadada dhinaceeda, xitaa haddii taraafikada lagu joojiyo wadada weyn.
Mitirrada gawaarida la dhigto waxaa geeyay Magaalada Vancouver ee qaata lacagta birta iyo kaarka deynta. Lacagta taleefanka sidoo kale waa loo aqbalaa koontada lacag bixinta ee horay loo diiwaangaliyay. Heerku wuu kala duwan yahay waxayna kuxirantahay meesha waxaana lagu sheegay dhinaca kore, saacada hoosteeda ama shaashad dusheeda mitirka.
Gawaarida la dhigto ee magaalada hoose guud ahaan waxay ku kacdaa $ 1-2.50 / saacaddii ama $ 12-20 / maalintii. Meelaha ganacsiga sida caadiga ah waxay leeyihiin mitir dhigashada wadada, iyadoo mitirrada aqbali doonaan isbeddelka Kanadiyaanka iyo Ameerika kaliya (Lacagta Mareykanka ee lagu aqbalo qiimaheeda). Wadooyinka guryaha la degan yahay waxay u oggolaan karaan dhigashada bilaashka ah, laakiin qaarkood waxay u baahan doonaan oggolaansho. Haddii aadan lacag ku haysan, mitirrada intooda badani waxay kuu oggolaanayaan inaad qoraal ugu dirto lambarka badan iyo lambarka 'PayByPhone', adoo u oggolaanaya lacag bixinta Visa ama Mastercard. Mitir kastaa wuu qeexi doonaa hadii la heli karo.
Baarkinka Fudud badan (raadi goobada liinta leh "P" weyn) darajo ahaan kuwa ugu awoodi kara baarkinka, laakiin guud ahaan qiimaha baarkinka si weyn ugama duwanaan doono baarkiyada ku dhex yaal meel cayiman. Badankood waxay aqbali doonaan bixinta kaarka deynta, iyo sidoo kale shilimaadka. Ka digtoonow kuwa wax khiyaameeya ee hareeraha seeraha sudhan, iskuday inaad ku iibiso tikidhada baarkinka wax ka yar qiimaha wajigooda - sida caadiga ah, waxay tikidhada ku iibsadeen kaararka amaahda ee la xaday. Sidoo kale taxaddar dhigashada dhigashada habeenkii, maxaa yeelay gawaarida jabsashadu ma ahan wax aan caadi ahayn.
Mitirka magaalada iyo sharciyada baarkinka waxaa loo dhaqan geliyaa si joogto ah. Dembiyada la xiriira mitirka waxay ku muteysan doonaan ganaaxyo. Xadgudubyada ka dhaca meelo badan oo gaar loo leeyahay guud ahaan lama dhaqangalin karo, laakiin waxay sababi karaan in gaarigaaga la jiido. Haddii gaarigaaga lagu jiido waddo magaalada ah, waad ka soo ceshan kartaa barta magaalada laga haysto ee 425 Industrial Ave.
Qaar ka mid ah mitirrada cusub ee meelaha gawaarida la dhigto ee gaarka loo leeyahay magaalada oo dhan ma aqbali karaan lacag caddaan ah, hubi inaad sidoo kale haysato kaarka deynta. Inta badan xarumaha gawaarida la dhigto sidoo kale waxay aqbalaan bixinta iyadoo la adeegsanayo barnaamijka PayByPhone.
Vancouver waxaa badanaa loo yaqaan raasumaalka saamiga baabuurta, oo ay la socdaan in ka badan 2,000 oo baabuur oo la heli karo. Wadaagista baabuurta oo u oggolaaneysa kirada gawaarida saacad iyo daqiiqad. Shirkadaha ku jira meeshan waxaa ka mid ah car2go, Evo, Modo, iyo Zipcar. Haddii aad xubin ka tahay BCAA, waxaad ka heli kartaa xubinnimada Evo bilaash ah websaydhkooda. Haddii aad horey u laheyd xubin car2go ah Waqooyiga Ameerika ama xubin Zipcar meel kasta ah, waxaad u isticmaali kartaa koontadaada hadda jirta inaad ku gasho raxanadooda Vancouver.
Shirkadaha tagaasida ee Vancouver:
Jaale Cab +1 604-681-1111
Taksiga Vancouver +1 604-871-1111
Shirkadaha tagaasida ee fadhigoodu yahay Richmond:
Richmond Cab + 1 604-272-1111
Beerta Magaalada Garden +1 604-233-1111
Destiny Limousine Ltd + 1-855-597-9040 Waxaad siisaa adeegyo limo ah markab iyo markab dalxiis iyo gegada diyaaradaha meelkasta oo ka mid ah magaalooyinka Metro Vancouver iyo Fraser Valley oo leh qiimeynta BBB A + tan iyo 2003
Wadaagga mootooyinka Vancouver Mobi ee u dhow garoonka BC Place ee ku yaal Bartamaha Magaalada Vancouver
Vancouver waa magaalo aad ugu fiican baaskiilka. Marka lagu daro marinnada baaskiillada ee aadka loo jecel yahay ee ku teedsan Stanley Park, False Creek iyo Kitsilano, waxaa jira shabakad marinnada baaskiillada ee isku xira magaalada oo dhan, iyadoo qaar badan oo ka mid ah waddooyinka baaskiillada hoose laga soocay taraafikada. Magaalada Vancouver waxay bixisaa khariidad marinnada baaskiilka ee laga heli karo dukaamada baaskiillada badankood ama khadka tooska ah. Sidoo kale, basaska oo dhan waxay wataan sariirtaha baaskiilka xagga hore si ay uga caawiyaan wadayaasha inay gaaraan qaybo ka yar helitaanka. Soo-booqdayaasha Waqooyiga Ameerika waxay ogaan doonaan in wadayaasha Vancouver ay caadeysteen inay wadada la wadaagaan baaskiillayda marka loo eego meelo badan.
Magaalada Vancouver waxay ka shaqeysaa a share baaskiil barnaamijka loo yaqaan Mobi. Kaadh 24-saac ah wuxuu ku kacayaa $ 7.50 tiro aan xadidnayn oo safarro 30 daqiiqo ah, oo nus saac kasta oo dheeri ah ay ku kacayso $ 5. Kaararka billaha ah ayaa loo heli karaa $ 15 (30 daqiiqadood oo safar ah) ama $ 20 (safarro 60 daqiiqo ah). Safarrada lagu raaco kaarka billaha ee ka qaata muddada loo oggol yahay waxaa lagu soo dallacayaa $ 2-3 dheeraad ah nus saac. Xarumaha Baaskiilku waxay ku faafaan magaalada hoose, West End, Gastown, Yaletown iyo False Creek, Granville Island iyo Kitsilano. Baaskiiladaha ayaa laga furaa lambarka isticmaalaha iyo PIN-ka ee la bixiyo ka dib markaad dhammaystirto diiwaangelinta bogga Mobi. Waxaa si weyn loogu talinayaa in booqdayaashu ay dhameystiraan diiwaangelinta booqashadooda ka hor, maadaama aadan ku sameyn karin saldhigyada wadaagista baaskiillada.
Waqti dheer kirada baaskiilka waxaa laga heli karaa dhowr dukaan oo madaxbannaan, halkaas oo aad ku kireysan kartid baaskiillada saacadda, maalinta ama usbuuca. Meelo badan ayaa sidoo kale kireysta baaskiilada tandem. Dukaamada waxaa laga heli karaa Bartamaha Magaalada, West End, Yaletown iyo meel u dhow Jasiiradda Granville. Haddii kale, soo iibso baaskiil la isticmaalay ama ku iibso ama ku tabaruc qof u baahan marka aad joogtid dhammaadka.
Kireysiga mooto waa heshiis wanaagsan oo u dhexeeya baaskiil iyo gaari. Mooto bajaajle looma oggola wadada baaskiilka caanka ah, laakiin waa macquul inaad ku safarto waddooyinka gudaha, dhigto oo aad ku lugeyso dhammaan meelaha soo jiidashada leh. Qiimaha celceliska waa ~ $ 80 24 saacadood + gaas.
Wareegga BC, Goobta 1: (ku xigta marinka hawada dekedda) Goobta 2: 73 East 6th Ave.
Kirada Mootada Vancouver, 501-2050 Scotia St.
In kasta oo Vancouver ay wali tahay magaalo da 'yar, waxay leedahay soo jiidasho kala duwan iyo meelo xiiso u leh booqdaha.
Astaamo iyo dhismooyin taariikhi ah
Qaar badan oo ka mid ah astaamaha magaalada iyo dhismayaasha taariikhiga ah waxaa laga heli karaa bartamaha magaalada. Goobta Kanada, iyada oo shiraaqadeeda gaarka ah, kuwa dhow Cauldron Olympic, qaabaynta farshaxanka farshaxanka ah ee Art Deco ee Dhismaha Badda iyo hoteelkii hore ee tareenka raaxada ee Hoteelka Vancouver waxay ku yaalliin degmada ganacsiga dhexe. Xadiiqadda Stanley Park (soojiidashada ugu caansan magaalada), oo ay weheliso socodka lugta ee Coal Harbor iyo Vancouver Aquarium waxay ku yaalliin West End iyo Gastown, oo ah magaaladii asalka ahayd ee Vancouver, waxay leedahay dhismayaal dhowr ah oo la soo celiyey, saacaddeeda uumi waa goob caan ah oo la booqdo . Qaabdhismeedka casriga ah ee mudan in la booqdo sidoo kale waxaa ka mid ah Shangri-La, dhismaha ugu dheer magaalada, iyo Sheraton Wall Center. Astaan ​​magaalo kale oo caan ah, suuqyada mashquulka badan iyo dukaamada Jasiiradda Granville, waxay u jirtaa koonfurta magaalada hoose ee Granville.
Matxafyada iyo qolalka lagu xafido Vancouver
Haddii aad raadineyso inaad wax ka barato dadka ku nool Xeebta Waqooyi-Galbeed iyo taariikhdeeda qaar, hal meel oo wanaagsan ayaa ah mid cajiib leh Matxafka Antropology Jaamacadda British Columbia, oo ay ku yaalliin dhowr kun oo shey oo ka soo jeeda Qowmiyadihii Koowaad ee BC. Matxafku sidoo kale wuxuu hoy u yahay uruurinta waxyaabo muhiim ah oo qadiimiga ah iyo walxaha qowmiyadeed ee qaybaha kale ee adduunka.
The Farshaxanka Farshaxanka Vancouver magaalada hoose waxay isku daraysaa maxalliga iyo kuwa caalamiga iyadoo loo marayo bandhigyo kala duwan iyo uruurin joogto ah oo diiradda saareysa farshaxanka caanka ah ee British Columbia, Emily Carr.
The Maktabadda Dadweynaha ee Vancouver, magaalada hoose ee Homer iyo Robson Sts, waxaa loo ekeysiiyay Roman Colosseum, waxaana ku yaal maktabada ugu weyn magaalada.
Aragtida kale ee magaalada hoose waa tan yar Farshaxanka casriga ah Wadada Nelson Street, oo ay ku taalo farshaxan casri ah. Sidoo kale u dhow, dhinaca bari ee Beenta Beenta ah ayaa ah qubbad dhalaalaya oo geodesic ah Dunida Sayniska ee Telus (badanaa loo yaqaan Sayniska Dunida), oo leh tiro bandhigyo ah, bandhigyo iyo galleeriyo loogu talagalay in sayniska looga dhigo madadaalo carruurta.
Meel kale oo weyn oo lagu hubiyo ayaa ah Hoolka Caanka ee Ciyaaraha BC iyo Matxafka garoonka Gate A ee BC Place Stadium. Xarunta Ciyaaraha ee loo yaqaan 'BC Sports Hall of Fame' iyo Matxafku waxay ilaalinayaan oo ay sharfayaan dhaxalka isboortiga ee BC iyada oo la aqoonsanayo guul aan caadi ahayn oo laga gaaro isboortiga iyada oo la adeegsanayo ururintooda iyo sheekooyin ay ku dhiirrigelinayaan dadka oo dhan si ay u daba-galaan riyadooda.
Waxa kale oo jira aragtiyo yaryar oo ka jira Kitsilano, oo ay ku jiraan Matxafka Badda ee Vancouver, Matxafka Vancouver, iyo HR Macmillan Space Center.
Magaaladu waxay leedahay jardiinooyin faro badan iyo jardiinooyin ku baahsan. Waxaa ugu caansan Xadiiqadda Stanley Park cirifka badhtamaha magaalada. Meelaheeda mayl ee jidadka socodka iyo baaskiil wadista, xeebaha, aragtiyaha cajiibka ah iyo soojiidashada (oo ay ku jiraan tiirarka dhaadheer) ee ku dhex yaal baarkinka ayaa siinaya wax qof walba. Wadada ugu caansan waa Seawall, oo ah waddo laami ah oo ku wareegsan wareegga Stanley Park oo hadda ku biireysa xeebta badda ee Coal Harbor iyo Kitsilano, oo dhererkeedu yahay 22 km. Ku Aquarium Vancouver wuxuu ku yaal Stanley Park. Jardiinooyinka kale ee caanka ah iyo jardiinooyinka oo ay ku jiraan VanDusen Botanical Garden ee Koonfurta Vancouver iyo Queen Elizabeth Park oo u dhow South Main, Beerta Nitobe Memorial (oo badanaa loo yaqaan Nitobe Japanese Garden) iyo UBC Botanical Garden oo ka tirsan Jaamacadda British Columbia iyo Dr. Sun Yat-Sen Classical China Garden oo ku yaal Magaalada Chinatown.
Gelitaanka soo jiidashada kaladuwan ee Vancouver waxay u dhaxeysaa $ 10 ilaa $ 30 qofkiiba. Waxaa jira marinno kaladuwan oo soo jiidasho leh oo la heli karo kuwaas oo ka caawinaya martida inay ku keydisaan gelitaanka tafaariiqda sida Eeg Kaarka Vancouver Smartvisit.
Ugu dambeyntiina, safarka Vancouver ma dhameystirmi doono iyada oo aan la jalleecin skyline iyo Buuraha Xeebta ee kor u kacaya magaalada (daruuraha oo oggolaanaya, dabcan!). Meelaha caanka ah ee lagu daawado waxaa ka mid ah Stanley Park iyo Xarunta Harbor ee magaalada hoose, Bangiyada Isbaanishka iyo Xeebaha Jericho ee ku yaal Point Gray iyo Lonsdale Quay oo ku taal Waqooyiga Vancouver. Aragtiyo kale oo xiiso leh ayaa laga arki karaa City Hall oo ah 12-aad iyo Cambie, Queen Elizabeth Park iyo East Van's CRAB Park.
Haddii aad rabto inaad naftaada jihayso magaalada, waxaa jira dalxiisyo kala duwan - bas, socod, hop-on, hop-off - oo ka baxsan Xarunta Magaalada oo kugula soo noqon doonta Vancouver lore inta lagu geynayo inta badan ee waaweyn soo jiidashada.
Aragtida laga helay Seawall ee Stanley Park
Vancouver sidoo kale waxay hoy u tahay muuqaal majaajilo ah oo istaaga. Iyada oo leh 3 naadi oo u heellan, iyo in ka badan labaatan meelood oo martigelinaya munaasabado joogto ah, Lower Mainland waxay martigelisaa ku dhowaad 10,000 improv, istaag, iyo bandhigyo maykro furan sanadkii. Ku qabso majaajilada dalxiis, dadka deegaanka ee xilli wanaagsan, ama soo socda iyo kuwa cusub ee soo socda riwaayadaha ka socda tiyaatarada ilaa kala-goysyada pizza-ga oo la kulma qaar ka mid ah deegaanka, dhaqanka dhulka hoostiisa
Vancouverites waxay jecel yihiin banaanka mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee la sameeyo waa socod, socod, baaskiil ama Badda. Waxay ka bilaabantaa Kanada Place ee hoose, waxay ku wareegsan tahay Stanley Park waxayna raacdaa xeebta False Creek ilaa Yaletown, Science World iyo Granville Island ilaa Kits Beach ee Kitsilano. Qaybaha ugu caansan waa agagaarka Stanley Park iyo xeebta woqooyi ee False Creek. Kiraynta baaskiil iyo rolleblade waxaa laga heli karaa dhowr dukaanno oo u dhow geeska Denman & West Georgia haddii aad ka doorbideysid gaadiid taayir leh socodka. Haddii cimiladu fiicantahay, u bax Jasiiradda Granville, kiro doonyo dheereeya oo raac doon raac biyaha ku xeeran Stanley Park iyo Coal Harbor. Koorsooyinka Golf-ka sidoo kale way ku badan yihiin magaalada, oo ay weheliyaan koorsooyin garoonka-iyo-putt-ka ah oo kharash badani ku baxayo.
Haddii aad doorbidi laheyd inaad qorraxda ku seexato intii aad ku ciyaari laheyd qorraxda, Vancouver wuxuu leeyahay tiro ka mid ah xeebaha. In kasta oo hubaal aysan ahayn bilic iyo hirar la’aan, waxaa jira ciid, biyo iyo dad badan maalmaha xagaaga ee qoraxdu jirto. Kitsilano waxay leedahay xarig xeebo, tan ugu caansan waa Kitsilano Beach, Jericho iyo Spanish Banks. Xeebaha Kits waa kuwa ugu caansan oo leh kubbadda laliska xeebta, Bangiyada Isbaanishku xoogaa way deggan yihiin oo waxay caan ku yihiin skimboarders. Waxaa ku yaal xeebo yar koonfurta iyo galbeedka magaalada hoose, iyadoo English Bay Beach (oo u dhow Denman & Beach) ay tahay tan ugu weyn uguna caansan. Ugu dambeyntiina, ma jiro wax dood ah oo ku saabsan xeebta Vancouver oo dhammaystirmi doonta iyadoon la xusin Wreck Beach dhamaadka caaradda Point Gray ee UBC. Sida ugu badan ee ay u egtahay ciidda, waxay ku heysaa meel ka mid ah aqoonsiga Vancouver waana xeebta kaliya ee magaalada aad ku wada xambaari karto dhammaantood.
Dad badan, Vancouver waa isku mid barafka iyo barafka. In kasta oo aysan jirin buuro barafka ku dhex yaal magaalada lafteeda, haddana waxaa jira saddex buurood oo "maxalli ah" (Cypress, Grouse Mountain iyo Seymour) oo ku teedsan dekedda Waqooyiga Xeebta. Dabcan, Vancouver waa marinka loo maro Whistler, kan ugu weyn uguna mid ah meelaha aadka loo qiimeeyo ee barafka Waqooyiga Ameerika.
Markii aad ku daasho wax ka qabashada banaanka, ama aad doorbideyso in qof kale qabto shaqada adag, marwalba waad qabsan kartaa kursi oo waxaad qaadan kartaa kooxaha isboortiga ee maxalliga ah.
Isku aadka ugu weyn magaalada waa xeegada (noocyada kala duwan ee lagu ciyaaro barafka, oo aan ahayn garoon) kooxda xirfadlayaasha maxalliguna waa Vancouver Canucks. Kooxda ayaa ku ciyaareysa Rogers Arena oo ku taal Magaalada City, xilli ciyaareedkuna wuxuu soconayaa Oktoobar ilaa Abriil (waana suurta gal inuu sii dheeraado marka ay ciyaarayaan). Tigidhadu waa kuwo qiimo badan oo tanaasulka ayaa ka sii xun, laakiin waa ciyaar fiican in si toos ah loo daawado. Kooxda xeegada yar yar ee maxalliga ah, ka Vancouver Rafaa, Soo bandhig khibrad jaban laakiin aan yareyn, laakiin ka ciyaar banaanka Xarunta Dhacdooyinka Langley oo xoogaa u jirta Vancouver.
The BC Lions, Kooxda Kubadda Cagta ee Canadian-ka ee magaalada (ka fikir kubbadda cagta Mareykanka oo ay la socdaan 12 ciyaartoy dhinac, seddex hoos u dhac, garoon waxyar ka weyn, iyo aagag aad u ballaadhan oo ballaadhan) ayaa ciyaara inta lagu jiro xagaaga iyo dayrta bartamaha BC Place.
The Vancouver Whitecaps FC, kooxdii seddexaad ee sidata magaca "Whitecaps", waxay bilaabeen inay ka dheelaan Major League Soccer bishii Maarso 2011, iyagoo noqday kooxdii labaad ee MLS ee Kanada (tan iyo markii ay ku biireen koox saddexaad oo Canadian ah). Waxay ku ciyaarayeen BC Place tan iyo bishii Sebtember 2011, markii goobtaas dib loo furay kadib dayactirkii Olambikada kadib. Whitecaps waxay markii hore qorsheeyeen inay dhisaan garoon cusub oo iyaga u gaar ah agagaarka hareeraha biyaha, laakiin mucaaradka maxaliga ah ayaa ku hogaamiyay Whitecaps inay ka dhigaan BC Place gurigooda muddada dheer.
BC Place sidoo kale waxay martigelisaa Kanada Toddoba, dhacdo sanadle ah oo ka Taxanaha Rugby-yada Dunida, Tartamo caalami ah oo taxane ah oo loogu talagalay kooxaha qaranka ragga ee rugby sevens, noocyo ka mid ah midowga rugby-ga oo ka kooban 7 ciyaartoy dhinac kasta halkii ay ka ahaan lahaayeen 15 (isla garoonka cabbirka isku mid ah) iyo kala badh 7 daqiiqo halkii 40. Dhacdadan ayaa sida caadiga ah la qabtaa dhammaadka wiigga labaad ee bisha Maarso iyada oo qayb ka ah lulid Waqooyiga Ameerika ah oo waliba ay ku jirto dhacdo ka dhacday Las Vegas.
The Rollergirls Terminal City waa Vancouver horyaalkeedii ugu horreeyay ee haween ah waxayna xubin ka yihiin Ururka Haweenka Flat Track Derby Association. Horyaalka waxaa la abuuray 2006, wuxuu hada leeyahay afar koox oo buuxa (Faster Pussycats, Magacyo Xun, Public Frenemy, iyo Riot Girls) iyo sidoo kale koox All-Stars ah oo ka kooban ciyaartoyda ugu fiican horyaalka. Ciyaartoydu waa koox haween ah oo kala duwan, laga bilaabo kalkaaliyayaasha caafimaadka ilaa shaqaalaha dhismaha, nashqadeeyayaasha qaabdhismeedka, soo saarayaasha telefishanka, macallimiinta, hooyooyinka guriga jooga, ardayda PhD-da ah iyo xiddigo dhaga weyn. Ciyaaraha ayaa ah kuwo xiiso leh oo xiiso leh (inta badan waxaa jira madadaalo nus-waqti ah). Haddii aad ka fekereyso inaad ka qeybgasho dagaal oo aadan waxba ka ogayn ama wax yar ka ogayn dariiqa gawaarida fidsan, fiiri qaybta 'Sidee Derby u Shaqeysaa' ee bogga TCRG. Ciyaaraha guud ahaan waxaa la qabtaa Abriil ilaa Sebtember iyo goobo kala duwan oo ku wareegsan Metro Vancouver, in kasta oo shirkii PNE ee Bariga Van uu ahaa goob caan ah.
Vancouver waxay leedahay hal koox oo baseball ah, the Vancouver Kanadiyaanka, oo ka ciyaara garoonka Nat Bailey ee ku yaal South Vancouver.
Labada jaamacadood ee waaweyn ee aagga Vancouver labaduba waxay leeyihiin barnaamijyo isboorti oo dhameystiran, in kasta oo aysan ku jirin astaanta sare ee hay'ado la mid ah koonfurta xadka:
Beesha Simon Fraser. Wakiil ka noqo Jaamacadda Simon Fraser ee ku taal Burnaby. Kooxuhu waxay kafaala qaadaan kooxaha toddobo isboorti oo rag ah iyo sagaal isboorti oo haween ah. Waxaa xusid mudan, SFU waa dugsiga kaliya ee Kanadiyaan ah ee xubin ka ah US NCAA, in kastoo ay ku jiraan Qeybta II, oo la tartamaya inta badan yar yar, hay'adaha Mareykanka ee gobolka. Kooxda kubada cagta ee SFU, xubin xubin ka ah NCAA, waxay ku hoos ciyaaraan qawaaniinta Mareykanka mana ahan Canadian.
UBC Thunderbirds. Wakiil ka noqo Jaamacadda British Columbia, oo ku taal Dhulalka Abaalmarinta Jaamacadda ee cidhifka galbeed ee jasiiradda Point Gray. Kooxaha garoonka Thunderbirds waxay ka kooban yihiin 15 nin oo isboorti iyo 14 haween ah. Si ka duwan SFU, UBC waa xubin ka tirsan guddiga maamulka Kanada ee isboortiga jaamacadda, U Sports.
Dhaqanka iyo ciidaha
Vancouver maahan wax ku saabsan banaanka. Waxay bixisaa tiyaatarro kala duwan, riwaayado iyo dhacdooyin kale oo dhaqameed. Waxaa ku yaal magaalada hoose xafladaha xafladaha iyo opera iyo in badan oo ka mid ah tiyaatarka tooska ah ee magaalada waxaa laga heli karaa Koonfurta Granville, gaar ahaan jasiiradda Granville oo leh farshaxankeeda kobcaya.
Dhaxalka Shiinaha ee magaalada ayaa nool inta lagu jiro Chinese sanadka cusub. Chinatown, oo ku taal dhinaca bari ee badhtamaha magaalada, midabkeedu waa awash wuxuuna leeyahay xaflado badan, oo ay ku jiraan bandhig. Juun ayaa la arkaa sanadkii Dabaal Dabaal Dabaal Deg on Beenta Beenta ah.
Ma jiraan wax iidoor ah oo xafladaha magaalada ah, oo kuwa badan oo maxalli ah gaar ahaan xaafad. Dabaaldegyada ay soo jiitaan dadka ugu badan ayaa ah Dabaaldegga Honda ee Iftiinka, oo ah seddex habeen oo siyaado ah rashka loo yaqaan 'English Bay' dabayaaqadii July. Wadamadu waxay la tartamaan 20-30 daqiiqo bandhigyo lagu duubay muusikada. Rashku wuxuu ka bilaabmaa 10PM waxaana si fiican looga daawadaa Sunset Beach ee West End ama Kits Beach / Vanier Park oo ku yaal Kitsilano. Waa si xoog leh waxaa lagula talinayaa in la raaco gaadiidka dadweynaha iyo in la gaaro saacado yar ka hor maadaama dadku ay badan yihiin. Wadooyinka agagaarka English Bay caadi ahaan waa la xiray laga bilaabo 6PM iyo wixii ka dambeeya.
CUN! Vancouver - Waxkastoo Cunto ah + Cunto karinta dhacaya sanad walba. In 2017, iiddu waxay dhacdaa laga bilaabo Nofeembar 6 - Nofeembar 11. Cunto kariyeyaasha caanka ah, makhaayadaha maxalliga ah ee caanka ah, khamriyeyaasha, soosaarayaasha cuntada iyo cabitaanka, qorayaasha buugaagta cuntada, dukaamada, farshaxanno, iyo kuwa kale oo badan oo ka socda adduunka cunnada ayaa isugu imaan doona 3 maalmood oo dadweyne ah xaraashka EAT Vancouver waxay koobeysaa khibradaha cuntada ee gaarka ah; fursadaha barashada sixirka daaha gadaashiisa ka socda xirfadlayaal xirfadlayaal ah; madadaalo firfircoon iyada oo loo marayo bandhigyo cunto karinta oo caan ah, tartamo culus oo culus, iyo bandhigyo kala duwan; iyo dukaameysi wacan.
Ciidaha kale ee xusida mudan waxaa ka mid ah Bandhig Faneedka Caalamiga ah ee Vancouver taasi waxay socotaa Sept-Oct; ah Fringe Festival kaas oo soo bandhigaya masrax toos ah qaabab kala duwan iyo goobo; Bard on Xeebta Shakespeare Festival kaas oo soconaya Bisha May - Sebtember ee Vanier Park oo ku yaal Kitsilano; iyo saddexda maalmood Fest Fest xeebta ee Kitsilano oo soo bandhigaysa xulasho ballaaran oo dadka hadda socda iyo kuwa soo socda, xididdada iyo falalka heesaha adduunka. Dhacdo kale oo xusid mudan waa sanadkii Vancouver Bandhigga Kibirka ee Vancouver, loogu talagalay 2013 oo la qabtay 4 Ogosto, oo soo jiidata in ka badan 600,000 daawadayaal.
Vancouver waa magaalo leh noocyo badan oo xarumo waxbarasho oo bixiya barnaamijyo ku saabsan ku dhowaad shaqo kasta oo suurtagal ah & / ama ka saarid. Waxaa jira laba jaamacadood oo waawayn (SFU & UBC) oo leh machadyo badan oo farsamada gacanta ah oo bixiya shahaadooyin marka lagu daro shahaadooyinka & dibloomooyinka.
Goobaha wax lagu barto gudaha magaalada Vancouver waxaa ka mid ah:
Jaamacadda Simon Fraser, ama SFU, waxay ku leedahay xarunteeda ugu weyn buurta dusheeda Burnaby oo leh aragtiyo cajaa'ib leh. Iyadoo ay ka sarreeyaan 30 000 arday waqti-buuxa ah, SFU waxaa si isdaba joog ah loogu qiimeeyaa Jaamacadda ugu Fiican Kanada ee Macleans. SFU sidoo kale waxay leedahay joogitaanka ugu weyn ee dugsiga sare kadib bartamaha degmada ganacsiga, oo leh Dugsiga Sare ee Segal ee Ganacsiga, Xarunta Morris J Wosk ee Wadahadalka, Xarunta SFU Harbor iyo SFU Woodward, oo aan lagu xusin xarun dayax gacmeed ku taal Surrey.
Munaaradda saacadda ee Jaamacadda British Columbia
The Jaamacadda British Columbia (UBC), ayaa loo qoondeeyay mid ka mid ah 30ka jaamacadood ee adduunka ugu fiican waana jaamacadda ugu weyn galbeedka Kanada. In kabadan 50,000 oo waqti-buuxa ah iyo waqti-dhiman ardayda maadooyin fara badan ayaa ka diiwaangashan xerada weyn ee UBC iyo degmada South Vancouver. UBC sidoo kale waxay leedahay xarun hoose oo ku taal Vancouver, oo ku taal Robson Square ee ku taal bartamaha degmada ganacsiga. Goobtani waxay si aad ah ugu jihaysan tahay waxbarashada dadka waaweyn, ganacsatada iyo ardayda ajaanibta ah. Kalandarrada koorsooyinka waxaa si fudud looga heli karaa Robson Square ama bogga UBC.
Kuleejka Langara, oo ku taal Koonfurta Vancouver waxay bixisaa dhowr barnaamij oo ku saabsan farshaxanka, cilmiga aadanaha, ganacsiga iyo tikniyoolajiyadda, iyo sidoo kale waxbarashada sii socota iyo fasallada ESL-ka.
The Emily Carr Machadka Fanka + Naqshadeynta on Granville Island waxay bixisaa barnaamijyo dhowr ah oo diiradda saaraya ugu horreyntii xagga naqshadeynta iyo farshaxanka muuqaalka ah.
The Xerada weyn ee Wadada Waqooyiga East Van waa jawi jaamacadeed iskaashi oo wada jir ah oo ay weheliso caawinta dhammaan jaamacadaha waaweyn ee maxalliga ah, iyadoo diiradda la saarayo farshaxanka, tikniyoolajiyadda, iyo deegaanka.
The Machadka Teknolojiyada ee British Columbia (BCIT), kulleej farsamo oo saldhigeedu yahay Burnaby, waxay leedahay xarun dayax gacmeed kuyaal magaalada Vancouver.
The Dugsiga Vancouver Film waxay ku taalaa magaalada hoose ee Vancouver.
Dhalinyaro badan oo soo booqda waxay yimaadaan Vancouver si ay u horumariyaan Ingiriisigooda.
Jaamacadda Kwantlen Polytechnic (KPU), oo ku yaal Richmond, Surrey, Cloverdale iyo Langley, waxay bixisaa in ka badan 120 barnaamij, oo ay ku jiraan xirfado, xirfado xirfadeed iyo shahaadooyin teknolojiyad, dibloomooyin, iyo shahaadooyin kala duwan.
Kuliyadda Brighton waxay bixisaa diblooma badan iyo barnaamijyo shahaado ah oo ay ka mid yihiin barashada daryeelka caafimaadka, ganacsiga, dhismaha, ganacsiga caalamiga ah, tikniyoolajiyadda macluumaadka, suuqgeynta internetka, iyo xisaabinta. Waxay leeyihiin saddex xarumood: Vancouver, Burnaby iyo Surrey.
Kulliyadda Bulshada ee Vancouver (VCC) waxay leedahay laba xarumood: Broadway, iyo Downtown. VCC waxay bixisaa dhowr shahaado iyo barnaamijyo diblooma oo kala duwan.
Kuliyadda Stenberg Kuleejka Stenberg wuxuu ku takhasusay daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada Adeegyada Aadanaha. Stenberg waxay bixisaa diblooma badan iyo barnaamijyo shahaado ah. Xarunta weyn ee Kulliyadda waxay ku taal Surrey, British Columbia.
Dhaqan ahaan, in badan oo ka mid ah warshadaha Vancouver waxay udub dhexaad u ahaayeen agabyada dekedda iyo qaybaha kaymaha iyo macdanta. In kasta oo warshadahaani ay weli muhiim u yihiin dhaqaalaha, shaqaaleeyaha ugu weyn Vancouver hadda waa isbitaalada kala duwan iyo xarumaha waxbarashada ee aagga iyo shirkado xafiisyo ku leh Vancouver sida Telus Corp iyo Kooxda Jim Pattison. Vancouver si kastaba ha ahaatee waxay ku fidday Xarunta Horumarinta softiweerka iyo bayotechnoolajiyadda, halka waddooyinku ay gadaal u yihiin warshadaha filimka firfircoon. Shaqooyin badan ayaa ka jira ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee kala duwan ee ka shaqeeya gobolka. Sida magaalooyin badan, shaqooyinka waxaa lagu dhajiyaa on-line-ka ama wargeysyada, laakiin waxay ku caawineysaa haddii aad leedahay xiriiro ka dhex jira warshadaha oo kuu tilmaami kara shaqooyinka furan laakiin aan la soo dhejin.
Sida Xarunta Dalxiiska, waxaa jira tiro shaqooyin adeeg ah oo la heli karo. Soojiidashada, maqaayadaha iyo hoteellada badhtamaha badiyaa waxay u baahan yihiin shaqaale. Meelaha kale ee la tixgelinayo waa Jasiiradda Granville iyo Waqooyiga Shore oo leh aagagga barafka iyo Buurta Grouse.
Kani waa muunad kaliya oo ah waxyaabaha aad ka raadin karto Vancouver. Booqo boggaga degmada ee kala ah faahfaahin kale.
Tip - Waxaa jira laba cashuur oo maxalli ah oo laga qaado badeecadaha ugu badan, the 7% PST (Canshuurta Iibka Gobolka) iyo 5% GST (Canshuuraha Alaabada iyo Adeegyada). PST ma khusayso makhaayadaha, shidaalka mootada, cuntada (oo ay ku jiraan cabbitaannada aan khamriga ahayn), fiitamiinnada, buugaagta, wargeysyada, joornaalada, baaskiiladaha, iyo dharka carruurta.
Wadada Robson Magaalada dhexdeeda waxaa ku yaal dukaamo badan oo dalxiis. Isgoyska Alberni ee deriska ah ayaa sidoo kale hoy u ah dukaamo heer sare ah oo kala duwan sida Louis Vuitton iyo Hermès.
Xarunta Baasifigga waxay leedahay in ka badan 150 dukaan, makhaayado iyo adeegyo haddii aad rabto inaad ku socoto Xarunta wax -iibsiga dhulka hoostiisa. Xarunta dukaamaysigu waxay ka bilaabmaysaa dukaanka calanka ee Nordstrom oo ku yaal dhammaadka woqooyi ee Robson Street, waxayna fidisaa ilaa Pender Street. Waxaa suuqa ku yaal dabaqyo badan oo ku xiran meesha aad joogto, ganacsatadda caanka ah waxaa ka mid ah Holt Renfrew, Harry Rosen, Gap, H&M iyo Apple Store; Suuqa wuxuu ku xiran yahay Hudson's Bay (waddooyinka Georgia iyo Granville), iyo Xarunta Vancouver (suuq yar oo inta badan ka kooban Lotto Center, London Drugs, iyo maxkamad cunto oo hoos taal Scotiabank).
Gastown - magaaladii asalka ahayd ee Vancouver hadana waa meesha ugu fiican ee laga helo Vancouver kitsch
Gastown. Waa xaafadda ugu faca weyn Vancouver laakiin waxaa dib loogu dhashaa degmo qaab-dhismeed casri ah oo casri ah. Dhismayaal taariikhi ah waxaa ku yaal makhaayadaha sinta, qolalka, iyo naqshadaha gudaha iyo dukaamo casri ah.
Yaletown sidoo kale waxay caan ku tahay dukaamada dharka aan caadiga ahayn iyo saloonnada dhamaadka sare. Wax yar oo ka mid ah Wadooyinka Dukaamaysiga Yaletown ee caanka ah waa: Mainland St., Hamilton St., iyo Pacific Blvd.
Jasiiradda Granville waa meel xiiso leh in la tago haddii aad qurxiso farshaxanka. Aaggu wuxuu ku faanaa suuq dadweyne, iskuul farshaxan (Emily Carr University of Art + Design), dukaamo, dukaan qalabka muusikada adduunka, makhaayado, tiyaatarro, qolalka, hoteel, doomaha doomaha iyo inbadan.
Kerrisdale waa aagga ku yaal 41st, inta u dhaxaysa Maple St iyo Blenheim St, oo ka kooban qiyaastii boqol ama wax ka badan dukaanno, makhaayado, iyo bakhaarro (silsilad ama si kale) ku yaal xaafad hodan ah.
Wadista Ganacsiga, gaar ahaan fidinta udhaxeysa 3rd Avenue iyo Venables St. ee Bariga Van, waxay u fiican tahay daawashada dadka, soosaarida (Suuqa Santa Barbara), farmaajo (La Grotta del Formaggio), sausage (JN&Z Deli), iwm.
Main Street, koonfurta Broadway ilaa 30th Avenue, waxay leedahay uruurin firfircoon oo balaarinaysa maqaaxiyo madaxbanaan, kafateeriyada, dukaamada dharka lagu iibiyo iyo dabaqyada yaryar.
Bariga Hastings inta udhaxeysa Renfrew iyo Clark waxay bixisaa qaar ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee qarsoon ee magaalada. Waxaa jira dukaamo wax soo saar badan oo koronto (Suuqa Donald).
Chinatown agagaarka Main iyo Pender, iyo dhanka galbeed ee hoos ka Pender ka Main, waa taariikh duug ah oo taariikhi ah oo leh raashinka iyo suuqyada daawada dhirta oo u eg dhadhanka qowmiyadaha, indhaha iyo dhawaaqyada Bariga Aasiya. Chinatowns kale oo casri ah ayaa ka soo ifbaxay agagaarka 41st Ave. iyo Victoria Drive, sidoo kale Richmond iyo Surrey.
Suuqa Punjabianka agagaarka Main, inta udhaxeysa 41st iyo 49th Ave. Cunto wanaagsan oo qiimo leh oo reer Punjabi ah oo ay weheliso qaar ka mid ah moodada Punjabi; astaamaha dariiqyada waa isku mid Punjabi.
Waxaa jira goobo wax iibsi oo gaar ah oo ku yaal Kitsilano iyo East Van. Xirmooyinka waxaad booqan kartaa dukaanka ugu horreeya ee ku dhashay Vancouver oo ku saleysan tafaariiqle isboorti, Lululemon Athletica, isboorti caan ku ah dharka dhiirrigelinta yoga. Jaakadaha Gore-texs ayaa ku yaal Vancouver meesha ugu wanaagsan ee laga iibsado waa Mountain Co-op, Taiga Works ama mid ka mid ah bakhaarada kale ee bannaanka ku yaal oo ku urursan jihada bari-galbeed ee weyn ee loo yaqaan Broadway (oo u dhiganta 9th Avenue, socda inta udhaxeysa 8aad iyo 10aad) inta udhaxeysa Cambie St. iyo Main St., oo dhanka bari ka xigta aagga Kitsilano.
Halkee laga joogaa Vancouver
Guud ahaan, hoyga Vancouver waa dhinaca qaaliga ah. Inta badan qolalka hudheellada sare waxay ka bilaabmaan $ 200-250 / habeenki, in kastoo aad ka heli karto kuwa qiimahoodu macquul yahay $ 100-180 inta badan. Inta badan qolalka motelku waxay ku baxaan meel u dhexeysa $ 80-150 / habeenkii. Haddii aad nasiib u yeelato inaad hesho hoy hudheel ah, kuwa ugu jaban kuwaan ayaa kugu kici doona qiyaastii $ 30/ habeenkii, si ka macquulsan inta udhaxeysa $ 35-50.
Xarunta Magaalada waxay ku taal bartamaha meelaha soojiidashada waxayna leedahay inta badan hoyga Vancouver, oo ay ku jiraan inta badan hoteelada-dhamaadka sare iyo kuwa dalxiisleyda martida loo yahay. Haddii aadan dhib ka qabin inaad ka fogaato hudheelada silsiladaha leh, waxaa jira dhowr hudheelo yaryar oo yar yar oo bannaanka ka ah bartamaha ganacsiga laakiin weli waxay ku dhow yihiin ficilka ka jaban afarta iyo shanta xiddig ee ikhtiyaariga u ah magaalada. Hoteellada Backpacker waa ikhtiyaar kale oo raqiis ah oo leh sariiro laga bilaabo $ 25 haddii aadan dhib u qabin inaad qol la wadaagto.
Joogitaanka ka baxsan aagga Xarunta Magaalada waxay ku siin kartaa xulasho ballaadhan oo ah guryo la awoodi karo. Waxaa jira dhowr hudheello / hudheello miisaaniyadeed oo ku teedsan Kingsway oo ku taal Bariga Van iyo Broadway oo ku taal Koonfurta Granville. Tiro ka mid ah B & Bs iyo kirada AirBnB ayaa sidoo kale ku faafay magaalada degmo kasta. Haddii aad rabto / ubaahantahay inaad kusugnaato garoonka diyaaradaha, Richmond waxay leedahay hudheelo dhowr ah oo leh heerar kala duwan oo raaxo iyo qiimo leh.
Ugu dambeyntiina, haddii aadan dhib ka qabin inaad baabuur waddo ama aad u safarto si aad u aragto Vancouver, hareeraha magaalada ayaa sidoo kale leh xulashooyin ka jaban. Waqooyiga Vancouver, Burnaby iyo New Westminster dhammaantood waxay marin u helaan Vancouver iyagoo adeegsanaya nidaamka gaadiidka dadweynaha. Jardiinooyinka Gobolka ugu dhow ee leh xerooyinka waxay ku dhow yihiin Maple Ridge (Golden Ears Provincial Park), Chilliwack, iyo Squamish.
Kaamamaynta jardiinooyinka magaalada waa mamnuuc hoosaadka sharciga Vancouver. Dadka socotada ah waxay maqli karaan sheegasho ah inay sharci tahay in lagu hoydo seerayaasha magaalada ee Victoria iyo Abbotsford; (dacwadaha maxkamadda awgeed oo u oggolaanaya dadka hoylaawayaasha ah inay sameeyaan); laakiin haddii tani ay sidoo kale khuseyso Vancouver ama ay u fidi doonto socotada doonaya xero bilaash ah lama oga. Taasi waxay tiri, tiro yar oo u badan dadka hoylaawayaasha ah waxay ku hoydaan jardiinooyinka magaalada waxayna u muuqataa in xeer hoosaadka aan had iyo jeer la dhaqan gelin. Haddii aad go'aansato inaad tan sameyso, iska ilaali Bartamaha Magaalada Eastside (Gastown-Chinatown oo si toos ah u tilmaame bariga), ha noqon carqalad, ha shidin dabka oo ka feejignow halista kaamam xannun / hurdo la'aan ah.
In an degdegga ah, garaac 9-1-1 taleefan kasta, xitaa taleefannada gacanta oo aan adeeg lahayn. Haddii lagaa qorey Rogers adeegga mobilada, ama aad dhex mushaaxeyso shabakadooda, waxay taageerayaan 1-1-2 iyo sidoo kale 9-1-1. Dhammaan xambaarayaasha kale waxay kaliya taageeraan 9-1-1.
Nambarada taleefanada ee 604, 778, iyo 236 ayaa is dul saaran Vancouver iyo nawaaxigeeda. Tani waxay ka dhigan tahay in Mainland Mainland ay u baahan tahay garaac toban-god ah, marka waa inaad garaacdaa lambarka aagga markaad wicitaan xaafadeed samaynayso. Wicitaanada ka baxsan gobolka (bariga Langley, ama waqooyiga Squamish, oo ay ku jiraan Whistler) waxay u baahan yihiin 1 ka hor nambarka aagga.
Telefoonada lacag bixinta, wicitaanada maxalliga ah waxay ku kacayaan midkiiba 50 senti guri. La soco in taleefanno badan oo dadweynaha laga saaray, gaar ahaan xaafadaha dhexdooda, sababo la xiriira kororka taleefannada gacanta. Taleefoonada lacag bixinta ee magaalada badiyaa waa jajabaan, laakiin taleefannada gacanta ee saldhigyada SkyTrain ee magaalada ayaa had iyo jeer shaqeeya. Telefoonada lacag-bixinta waxaa loo isticmaali karaa in lagu waco 911 oo lacag la’aan ah.
Goobaha kafateeriyada ee Internet-ka ayaan caan u ahayn sidii ay ahaan jireen, laakiin qaar badan ayaa ku sii jira Vancouver, guud ahaanna waa kuwo qiimahoodu macquul yahay, sida caadiga ah $ 2-5 saacaddii oo leh kaararka maalinta oo dhan la heli karo. Si kastaba ha ahaatee, Wi-Fi bilaash ah ayaa laga heli karaa inta badan huteelada, kafateeriyada, iyo maqaayadaha, iyo sidoo kale meel kasta oo badhtamaha magaalada ah. Goobta Kanada, tusaale ahaan, Bell wuxuu leeyahay saldhigyo bilaa-waayir ah oo lacag la'aan ah oo ku yaal barxadda ugu weyn ee Xarunta shirarka. Sidoo kale, inta badan suuqyada gudaha iyo dukaamada qaxwaha waxay leeyihiin Wi-Fi bilaash ah. Sidoo kale, magaaladu waxay ka hawlgashaa 43 goobood oo Wi-Fi bilaash ah oo magaalada oo dhan ah. Liis buuxa oo ah meelaha kulul ee wireless -ka ah ee magaalada ku shaqeeya ayaa laga heli karaa halkan.
Ammaan ku joog Vancouver
Vancouver waa meel fiican oo la booqdo haddii aad isticmaasho caqli saliim ah sida inaad isha ku hayso waxyaabaha aad haysato, inaad ogaato halkaad u socoto iyo inaad ka fogaato luuqyada iyo meelaha aan la aqoon habeenkii waa inay kaa ilaaliyaan dhibaatada. Ilaa aad ku lug yeelatid howlo sharci darro ah (sida ka ganacsiga daroogada), aad ayey u yar tahay inaad ku dhacdo dhibbane nooc kasta oo dembi gacan ka hadal ah. Haddii aad u baahan tahay gargaar degdeg ah, garaac 911.
Sida magaalo kasta oo weyn, Vancouver waxay leedahay aagag ay tahay in taxaddar lagu muujiyo. Waxa ugu caansan waa Downtown Eastside (gaar ahaan Hastings Street oo udhaxeysa Abbott iyo Gore). Xaafaddan ayaa caan ku ah hoy la'aanta, isticmaalka daroogada, iyo dhilleysiga. Xaaladahaas awgood, rabshaddu waa dhibaato caadi ah. Haddii aad si qalad ah ugu dhex mushaaxdid Bartamaha Magaalada Easpatide-ka ma ahan wax dhib ah in la helo waddada looga baxo, laakiin haddii aad lumiso ama aad raaxo-darro dareento waxa ugu fiican ee aad sameyso waa inaad la xiriirto sarkaal booliis ah. Dalxiisayaasha sahaminaya Gastown iyo Chinatown waxay si fudud ugu dhex wareegi karaan Downtown Eastside iyagoon ogayn.
Waxa kale oo xikmad leh in taxaddar laga muujiyo aagga Granville Mall ee ku yaal badhtamaha magaalada habeennada Jimcaha iyo Sabtida. Maaddaama ay tahay baarka Vancouver iyo goobta lagu caweeyo, mugga dadka badan ee ay weheliso cabbitaanka aalkoladu waxay ka dhigayaan akhlaaq xumo iyo dabeecad xumo khilaaf caadi ah. Laakiin tani waa inaysan u dhaqmin sidii carqalad - haddii aadan dhibaato raadinayn, malaha inaadan helin, oo booliis xoog leh ayaa jooga. Wadooyinka habeenkii ee aagga Granville Mall caadi ahaan (iyo macno ahaan) waxay kuxiran yihiin dadka xilliyada habeenkii. Isku darka noocaas ah ee dadka iyo aalkoladu waxay noqon karaan isku dhaf khatar ah haddii aadan taxaddar sameyn.
Qeybo ka mid ah magaalada waxay leeyihiin heerar dambi hantiyeed oo aad u sareeya. Xatooyada gawaarida ayaa si gaar ah dhibaato u leh gawaarida la dhigto taarikada ajnabi ama gobol ka baxsan ayaa had iyo jeer la bartilmaameedsadaa. Waxa ugu fiican ayaa ah inaadan uga tagin wax lacag ah iyo waxyaabo qiimo leh aragti cad. Qaar badan oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa adeegsada qufulka isteerinka si looga hortago xatooyada gawaarida.
Intaad isticmaaleyso gaadiidka dadweynaha, haddii aad dareento amni-darro, u tag sarkaal booliis Transit ah (badanaa saldhigyada SkyTrain). Codsiyada aan degdegga ahayn, waxaad wici kartaa + 1-604-515-8300.
Taabashada ayaa caadi ka ah qaybo ka mid ah magaalada hoose, laakiin lagama yaabo inay dhibaato keento. Ha noqon mid edeb daran, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay jiraan cawaaqib xumo.
Cannabis ayaa laga iibsan karaa dukaamada gaarka loo leeyahay ama dawladu waxay maamushaa dukaamada BC Cannabis, oo sidoo kale laga helo iibka internetka. Waa sharci in dadka qaangaarka ah ee ka weyn 19 ay cunaan oo haystaan ​​ilaa 30gram xashiishad ah. Lama ogola in lagu cabo ama la cuno xashiishad meel kasta oo laga mamnuuco isticmaalka tubaakada.
Waxaa jira ciqaab culus oo wadista baabuurka iyadoo ay saameyn ku leedahay saameynta THC, oo ay ku jiraan ganaaxyo iyo shilalka gawaarida. Sidoo kale, in kasta oo Gobolka Washington uu sharciyeeyay xashiishadda madadaalada ee heer gobol haddana waa sharci darro in wax alaab xashiish ah laga keeno xadka dhinac kasta. Ha ka iibsan xashiishka Kanada hana isku dayin inaad u qaadatid Gobolka Washington, ama taa caksigeeda, xitaa ha ku jirin jidka laga gudbo sida Point Roberts.
Wargeysyada ka soo baxa magaalada Vancouver
Vancouver Sun. Wargeyska maalinlaha ah ee ugu weyn Vancouver.
Gobolka. Qaab-dhismeedka maalinlaha ah. Xoogaa ka dareen badan Qorraxda iyo qayb ka wanaagsan isboortiga, laakiin waxaa daabacay isla shirkadda iyo qolka wararka. (la cusbooneysiiyay Jul 2020)
Georgia Toosan. Warqad toddobaadle ah oo bilaash ah oo bixisa sida ugu fiican ee loogu talagalay baararka maxalliga ah iyo liisaska kale ee madadaalada. Waxay sidoo kale badiyaa leedahay dhowr labo hal rasiidh makhaayadaha maxalliga ah.
Tyeekii. Warqad khadka tooska ah oo maalinle ah oo bilaash ah oo diiradda saareysa siyaasadda madaxbanaan iyo ka warbixinta dhaqanka.
Kormeerayaasha Vancouver. Vancouver Observer waa wargeys madaxbanaan oo khadka tooska ah ka shaqeeya, oo ka hadlaya siyaasada deegaanka, farshaxanka, deegaanka, tikniyoolajiyadda, caafimaadka, nafaqada, iyo mowduucyo kale
Vancouver Waa Cajiib. Warqad maalinle ah oo bilaash ah oo khadka tooska ah diiradda lagu saaro dhacdooyinka dhaqameed, cuntada, iyo arrimaha socda ee bulshada.
Toddobaadyada kale ee bilaashka ah waxaa ka mid ah Vancouver Courier, Westender, iyo Xtra West (wargeys laba-toddobaadle ah oo isu galmooda iyo haweeney isqabta). Wargeysyada bilaashka ah waxaa ka mid ah 24 Saacadood iyo Metro.
Waxaa jira tiro ka mid ah bixiyeyaasha shabakadaha bilaa-waayirka ah ee ku teedsan dhulka hoose ee BC, dhammaantoodna waxay ku yaalliin goobo dukaanno oo dhan ku yaal Vancouver, oo ay ku jiraan Telus / Koodo, Rogers / Fido / Chatr, Bell / Virgin, iyo Freedom Mobile. Ikhtiyaar kale waa Mobile-ka Dadweynaha, oo ku shaqeeya khadka tooska ah oo bixiya 10 maalmood qorshooyin (aad ugu fiican booqdayaasha). Qaar badan oo ka mid ah shirkadaha xarkaha wireless-ka bixiya ayaa bixiya qorshooyinka safarka dalka weyddiiso shirkadda side sida ku saabsan qiimeynta safarkaaga ka hor.
Xarumaha Daryeelka Caafimaadka
General Vancouver - geeska Oak St iyo West 12th Ave, VGH waxay u adeegtaa isbitaalka weyn iyo qaybta gargaarka degdegga ah ee Vancouver
Isbitaalka Carruurta - haddii aad ilmo ka yar 18 sano geyso ER, waxaa laguu tilmaamayaa Isbitaalka Carruurta. Waxay ku taal Oak St agagaarka King Edward Avenue.
Bawlos - faras magaalaha, ama Xarunta Magaalada, Isbitaalka St. Jiilaal kasta, St. Paul wuxuu qurxiyaa hore ee Isbitaalka nalal si uu u dhiirrigeliyo tabarucaadka sadaqada.
Isbitaalka Mount Saint Joseph - 3080 Prince Edward St. Isbitaalka kaliya ee kuyaala Magaalada dhanka Bari ee leh qolka gurmadka (8:30 AM-8PM). Saacadahaas dibaddooda, dadka waxaa laga codsanayaa inay u tagaan Vancouver General ama St. Paul midkood daryeelka degdegga ah.
Xarunta Daryeelka Degdega ah ee UBC - MA ahan xarun caafimaad oo lagu socdo laakiin ma ahan qol deg deg ah, UBC UCC waxay leedahay saacado xadidan (waxaa lagu xiray 10PM, laakiin waa xulasho wanaagsan hadii dhibaatadaadu aysan aheyn xaalad deg deg ah - asal ahaan waa socod-socod dheereeya) rug caafimaad oo saacado dheeri ah leh.
Waxa kale oo jira dhowr rug caafimaad oo ku yaal agagaarka Vancouver. Nasiib darro sugitaanku badanaa waa qiyaastii 30-45 daqiiqo ballanta.
Australia, 1075 W Georgia St, Ste 2050,, fax: + 1 604-684-1856.
Shiinaha (Jamhuuriyadda Dadka), 3380 Granville St.
France, 1130 W Pender St, Ste 1100. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Germany, 999 Canada Pl, Ste 704,, fax: + 1 604-684-8334.
Hindiya, 325 Howe St, Ste 201,, fax: + 1 604-682-3556.
Ireland (Sharaf), 837 Beatty St, Ste 210,, fax: + 1 604-683-8402.
Korea (Jamhuuriyadda), 1090 W Georgia St, Ste 1600,, fax: + 1 604681-4864. 9 AM-4: 30PM.
New Zealand, 1050 W Pender St, Ste 2250,, fax: + 1 604-684-7333.
Switzerland, 999 Canada Pl, Ste 790,, fax: + 1 604-684-2806.
Boqortooyada Ingiriiska, 1111 Melville St, Ste 800,, fax: + 1 604-681-0693.
United States, 1075 W Pender St,, fax: + 1 604-685-7175.
Degmooyinka ku dhow dhow
Waxaa jira dhowr waxyaalood oo lagu arko oo lagu sameeyo meel ka baxsan xudduudaha Vancouver. Qaar ka mid ah kuwa ugu caansan ayaa hoos ku taxan. Dhammaan meelahan waxaa laga heli karaa gaadiidka dadweynaha, ama haddii aad baabuur leedahay, saacad gudaheed.
Waqooyiga Shore - Ka soo qaado aragtida Grouse Mountain (The Peak of Vancouver), u lugee lugo buundada hakinta ama ku raaxeyso mid ka mid ah fursadaha madadaalada bannaanka - socodka, fuulista buuraha, barafka / barafka lagu safro, kayaking - oo la bixiyo. Waxqabadka xagaaga ee ugu caansan aagga waa socodsiinta 'Grouse Grind', oo ah 2.9 km, 853 m sare u kac kor u kaca dhinaca buurta Grouse.
West Vancouver - Degmo woqooyi ka xigta buundada iridda Libaaxa, kuna socota Whistler. Hoyga xeebo badan, jiingado, jardiinooyin iyo hanti qaali ah oo qaali ah, halkaas oo aragtiyada xiisaha leh ee Vancouver lagu xoqi karo iyadoo la kaxeynayo meelaha sare.
Burnaby - Dukaan ku sii wad ilaa aad ka dhacdo Metropolis oo ku taal Metrotown, oo ah suuqa ugu weyn ee laga dukaameysto ee ku yaal British Columbia, ama ku nasato mid ka mid ah jardiinooyinka waaweyn ee gobolka. Sidoo kale hoy u ah jaamacada weyn ee Simon Fraser University (oo caan ku ah dhismaheeda arxan darada ah), dusha sare ee buurta Burnaby.
Coquitlam, Coquitlam iyo Port Moody (aagga Tri City) - Nus saac baabuur wadista Hastings Street ilaa Barnet Highway ayaa kuu keeni doonta Port Moody, oo degaanka looga yaqaan Magaalada Fanka.
Richmond - Magaalada leh saameyn weyn oo Aasiya ah oo leh xulashooyin badan oo loogu talagalay Shiinaha, Jabbaan iyo Kuuriya cunnadooda iyo wax soo iibintooda, macbudka ugu weyn ee Buddhist ee Waqooyiga Ameerika iyo Steveston xeebta ku teedsan ee dhanka koonfureed ayaa leh jawi deggan, magaalo yar.
Surrey / White Rock - Waddo daqiiqad u jirta 45 oo ka fog Vancouver, waxay caan ku tahay cimilada dhexdhexaadka ah iyo xeebta bacaadka ah.
Langley (British Columbia) - Tuulo leh dukaamo gaar ah, makhaayado iyo goobta mid ka mid ah qalcadihii ugu horreeyay ee laga dhisay British Columbia.
New Westminster - Magaalo yar oo ku taal daanta Fraser River oo mar ahaan jirtay caasimada British Columbia.
Delta - Waxay ka kooban tahay saddex beelood oo ay kala go'een dhul beereed; Waqooyiga Delta, Ladner, iyo Tsawwassen. Ladner wuxuu leeyahay jawi qurux badan oo tuulo u eg kaas oo soo jiitay dhowr filim in halkaas lagu toogto waana guriga George Sanatoos Reigel Migratory Migratory. Tsawwassen wuxuu leeyahay Xadiiqad Goboleedka Xudduudda Bay oo leh wadooyinkeeda lugta leh iyo fursadaha daawashada shimbiraha.
Jasiiradda Bowen waa safar caan ah oo maalinle ah ama safar usbuuc dhammaad ah oo bixiya kayaking, socodka, dukaamada, makhaayadaha, iyo inbadan. Bulshadan runta ah waxay ku taalaa Howe Sound wax yar oo ka baxsan Vancouver, waxaana si fudud looga heli karaa iyada oo loo maro tagaasida biyaha loo qorsheeyey ee tagaya Vancouver / Kitsilano-Granville Island ee ku taal bartamaha magaalada Vancouver ama doonta ka timaadda Horseshoe Bay ee Galbeedka Vancouver.
Kuwa ku raaxeysanaya waxqabadyada bannaanka, socodsiinta marinnada Badda ilaa Sky waa u muhiim. 'Squamish' ayaa isku calaamadeeyay "Caasimadda Madadaalada Dibedda ee Kanada" iyo qaddar aan caadi ahayn oo fuulid dhagax ah oo tayo leh, Baaskiil wadista buuraha, qulqulka biyaha cad, socodka, kaxaynta, fuulitaanka fardaha, kalluumeysiga, golf, jidadka socodka iyo kuwo kale, xaqiiqdii waxay u qalantaa cinwaanka . Squamish wuxuu qiyaastii kalabar u dhexeeyaa Vancouver iyo Whistler. Whistler (1.5 saacad u jirta Vancouver) waa qaali laakiin waa la ogyahay sababtoo ah Olombikada Jiilaalka ee 2010. Xilliga jiilaalka, ku raaxayso qaar ka mid ah barafka ugu fiican Waqooyiga Ameerika, iyo xagaaga isku day xoogaa baaskiil buur dhab ah.
Meel kale oo wanaagsan oo loogu talagalay waxqabadyada bannaanka waa Mount Baker oo ku teedsan xadka Washington. Waqtiga wadista waa qiyaastii seddex saacadood, laakiin safafka xuduudaha wuxuu ku dari karaa meel kasta daqiiqado yar illaa dhowr saacadood safarkaaga.
Dooxada Fraser ee u dhow waxay leedahay dhowr jardiinooyin iyo harooyin ku fiican kalluumeysiga, socodka ama nasashada.
Caqli-xumo siyaasadeed: Point Roberts, oo ah tuulo qayb ka ah Mareykanka laakiin waxaa kaliya lagu gaari karaa dhul iyada oo loo marayo Delta, BC.
Jasiiradda Vancouver waa meel wanaagsan oo looga guuro Vancouver. Victoria, caasimada British Columbia, waa meel lagu nasto. Tofino waa meel qurxoon oo ku taal xeebta galbeed ee jasiiradda, waxay u fiican tahay nibiriga iyo daawashada duufaanka waxayna leedahay qaar ka mid ah kuwa ugu fiican Kanada (haddii aad geesinimo u noqon karto biyaha qabow). Jasiiradda waxaa lagu gaaraa doonta, doonta iyo baska.
Jasiiradaha Gacanka Koonfureed sidoo kale waa safar gaaban oo doon ah ama duulimaad diyaarad ah. Jasiiradaha Gacanka ee Koonfurta waxaa loo yaqaannaa beelahooda farshaxanka, khamriyeynta, beeraha iyo beeraha. Jasiiraddani waxay sidoo kale ku faantaa fursado aan caadi ahayn oo doomaha lagu raaco, doonyaynta, socodka socodka, kaamamaynta iyo daawashada duurjoogta.
Okanagan waa afar ilaa shan saac wadada bari, oo leh tiro khamri badan, howlaha biyaha xagaaga iyo barafka xilliga jiilaalka.
Muuqaalka Banff, Banff National Park iyo Rocky Mountains waa socod dheer oo maalinle ah (8-9 saacadood) bariga.
Dhinaca koonfureed, Mareykanka gudaheeda, Seattle waa labo saac iyo badh wadid Portland waa shan saac oo wadis ah (marka laga reebo safka xadka).
Best Galbeedka Bakerview Inn Abbotsford
Galbeedka Galbeedka Capilano ee ugu Fiican & Qolalka Vancouver
Ugu Wanaagsan Nabada Galbeedka Galbeedka Inn Vancouver
Hoteelka ugu wanaagsan Western Plus Chateau Granville Vancouver
Xarunta Shirarka ee Xarunta 'Western Plus Coquitlam Inn'
Ugu Wanaagsan Galbeedka Plus Magaalada Vancouver
Ugu Fiican Western Plus Kings Inn & Xarunta Shirka Burnaby
Goobta ugu Fiican Western Plus Regency & Xarunta Shirka Abbotsford
Sands-ka Reer Galbeedka Ugu Fiican Ee Ugu Fiican Xeebta The Sea Vancouver
Hoteelka ugu wanaagsan Western Plus Uptown Hotel Vancouver
Miisaaniyadda Inn Patricia Vancouver
Hoteelka Cassandra Vancouver
Hoteelka Century Plaza & Spa Vancouver
Huteelka Xeebta Dhuxul Xeebeedka Vancouver
Xeebta Surrey Guildford Hotel
Guryaha raaxada & Qolalka Waqooyiga Vancouver
Raaxada Gudaha Magaalada Vancouver
Maalmaha Inn Vancouver Downtown
Maalmaha Inn Vancouver Metro
Empire Landmark Hotel & Xarunta Shirarka Vancouver
Huteelka Fulinta Iyo Xarunta Shirka Burnaby
Huteelka Fulinta Le Soleil Vancouver
Hoteelka Fulinta Vintage Park Vancouver
Fulinta Plaza Hotel & Xarunta Shirka Coquitlam
Hotelka Fairmont Pacific Rim Hotel Vancouver
Afarta xilli ee Vancouver
Hoteelka Joorjiya ee Vancouver
Hoteelka Granville Island Vancouver
Hotelka Greenbrier Vancouver
Maalinta Farxada leh Inn Vancouver
Holiday Inn Hotel & Suites Waqooyiga Vancouver
Holiday Inn Vancouver-Xarunta Broadway
Hoteelka L'Hermitage Vancouver
Deganaanshaha La Grande ee Hoteelka Sutton Place
Hoteelka Loden Vancouver
Hoteelka Metropolitan Vancouver
Hoteelka Waqooyiga Vancouver
Hoteelka Pan Pacific Vancouver
Park Inn & Qolalka Broadway Vancouver
Poco Inn & Suites Hotel & Xarunta Shirarka Vancouver
Tayada tayada leh ee Beenta Beenta ah ee Vancouver
Magaalada Ramada Xaddidan Magaalada Vancouver
Ramada Plaza & Xarunta Shirka Hotel Abbotsford
Hotelka Ramada Vancouver Park Park
Hoteelka Renaissance Vancouver
Degaanka Inn Vancouver Downtown
Rosedale oo ku taal Robson Suite Hotel Vancouver
Qolalka Rosellen ee Stanley Park Vancouver Hotel
Sandman Hotel Vancouver Xarunta Magaalada
Qolalka Sandman On Davie Vancouver Hotel
Hotelka St. Regis - Vancouver
Qorrax dhaca & Qolalka Vancouver
Huteelka Burrard Vancouver
Hotelka Fairmont Vancouver
Hoteelka Madaarka ee Fairmont Vancouver
Hotelka Fairmont Waterfront Hotel Vancouver
Hoteelka Terminal City Club Vancouver
Hoteelka Sutton Place ee Vancouver
Travelodge Libaaxii 'Gate Vancouver'
Hotelka Wedgewood & Spa Vancouver
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal ee Kanada > Xalaal Safarka Vancouver